ShweMinThar: October 2018
Posted by Alex Aung at 2:58 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 5:25 AM No comments:
Digital camera ကင်မရာအကြောင်း ပြောတော့မယ်။ ရေးတော့မယ်ဆိုရင် ဖလင်ခေတ်က ကင်မရာအကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြော ပြန်ပြောင်းရေးနေရတယ်။ အဲဒါဟာလည်း ကျနော့်အနေနဲ့ ကင်မရာစကိုင်ကတည်းက ဖလင်ကင်မရာနဲ့ စကိုင်ခဲ့လို့ ဖလင်ကိုပဲ တမ်းတနေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာဆိုတာ ဖလင်ကင်မရာကနေ မျိုးဆက်မြင့်သွားတဲ့ သဘောတရားရှိနေလို့ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာအကြောင်း ရှင်းပြမယ်ဆိုရင် ဖလင်ကင်မရာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောနေရတာပါ။
အခုလည်းပဲ Sensor အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာ ဖလင်ကင်မရာနဲ့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ ကျနော် ရေးခဲ့တဲ့ အရင်တစ်ပုဒ်က ကင်မရာ Level များအကြောင်းမှာ ကင်မရာ Level အနေနဲ့ Point & Shoot, Bridge, DSLR ( Entry, Semi Pro & Pro) , Mirror Less, Medium Format စတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေ မဆိုထားပါနဲ့ ဟန်းဆက်က ကင်မရာမှာတောင် ပုံရိပ်ကို ဖမ်းယူပေးတာဟာ Sensor ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ ၁)
ဖလင်ကင်မရာတုံးက Lens ကနေ၀င်လာတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖလင်ကော်ပြားက ဖမ်းယူပြီး ဓါတ်ပြုဆေးတို့နဲ့ ပုံဖော်ရပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ရောက်လာတော့ ဖလင်ကော်ပြားအစား Lens ကနေ၀င်လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကို Camera က Image Sensor ကနေ ဖမ်းယူပြီး Electronic Signal အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့သည်လို Image Sensor ကနေ Electronic Signal ပြောင်းလဲပေးတဲ့ Sensor များထဲမှာ အမျိူးအမည်များစွာနဲ့ရှိပြီး ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေမှာ အဓိက အသုံးများတဲ့ Sensor တွေကတော့ CCD ( Charge- Coupled Device )Sensor, CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor) Sensor လို့နှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံ ၂)
CCD Sensor ဆိုတာက Analog Device ဖြစ်ပြီး သူ့အပေါ်ကျရောက်လာတဲ့ အလင်းရောင်တွေကို Electric Charge အဖြစ်လက်ခံထားပြီး Electric Charge ကို Voltage ပြောင်းပေးပြီး ကင်မရာထဲက လျှပ်ပတ်လမ်းထဲမှာ အချက်အလက်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးတာပါ။ ဒီ CCD Sensor နည်းပညာရပ်က ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာမှာတင် မဟုတ်ပါဘူး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ သိပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာတို့မှာ အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်တွေ ဖော်ထုတ်တဲ့ နေရာမှာလည်း အသုံးချကြပါတယ်။
ဒီနည်းပညာကလည်း CCD Sensor နည်းပညာနဲ့ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက် အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် CMOS မှာက Metal Oxide Semiconductor တစ်စုံကို အသုံးပြုပြီး အလင်းပုံရိပ်တွေ ဖမ်းယူပေးတာပါ။
CCD Sensor နဲ့ CMOS Sensor ဘာကွာသလဲ
CCD Sensor နဲ့ CMOS Sensor ဘယ်ဟာကသာသလဲလို့ မေးလာရင် ကျနော့်အမြင်နဲ့ရော နည်းပညာအနေနဲ့ရော ပြောရခက်ကြီး ဖြေရခက်ကြီးပါ။ Camera လောကသားတွေကို Canon နဲ့ Nikon ဘယ်ဟာက ကောင်းသလဲလို့မေးရင် (တတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်စေမည့်အကြောင်းအရင်းက နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့် အငြင်းပွားမှုကြောင့်မဟုတ် Canon User နဲ့ Nikon User တွေကြောင့် ဖြစ်မှာလို့ နောက်ပြောင် ဆိုရိုးစကားရှိတာကြောင့်) လွှဲလှီးပြီး ဖြေကြသလိုပဲ သူ့ဟာနဲ့သူတော့ အားနည်းချက် အားသာချက် ရှိတာပါပဲလို့ နှာစေးပြရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် မမြ၀င်းလို လှေနံနှစ်ဖက်မနင်းပဲ တစ်ဖက်ကို ခပ်ပါပါနဲ့ပြောရရင် COMS Sensor နည်းပညာကစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ပိုနည်းသလို DATA ဖတ်တာလည်း ပိုမြန်တယ်လို့တော့ ဆရာ့ဆရာတွေ ပြောကြားချက် မှတ်သားထားဘူးကြောင်းပါ။ နီကွန်ထဲက DSLR Entry အဆင့်ထဲက ကင်မရာတွေပဲကြည့်ပါ။ D3000 တုံးက CCD Sensor ကို အသုံးပြုကြပြီး နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ D3300 လောက်ကနေစပြီး CMOS Sensor ကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဟန်းဆက်ပါ ကင်မရာတွေတောင်မှ CMOS Sensor ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားကြောင်း တခုတ်တရ ကြော်ငြာလာပါပြီ။
DSLR မှာ Full Frame & Crop Frame ဆိုတာဘာလဲ
Digital Camera ကနေ ပုံတွေရိုက်ယူတဲ့အခါမှာ ပုံအရည်အသွေး ကောင်းမှုဟာ Sensor ရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ တိုက်ရိုက်ကျတယ်လို့ ဆိုလိုချင်ပါတယ်။ စောစောက ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ မှန်ဘီလူးက ၀င်လာတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖလင်ခေတ်က ဖလင်ကော်ပြားကနေ မှတ်သားပေးထားသလို ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ ပုံရိပ်ကို ဖမ်းယူပေးတာဟာ Sensor ပါလို့ ဆိုထားပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့် Sensor Size ကြီးလေလေ ပုံအရည်အသွေး ပိုကောင်းလေလေ။ ကင်မရာရဲ့ ဈေးနှုန်းလည်း တော်ဝင်သဇင် ဖြစ်လေလေပေါ့ဗျာ။
ဖလင်ခေတ်တုံးက ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့ အလွယ်တကူ ၀ယ်ပြီးရိုက်နေတဲ့ ၃၆ကွက် ဖလင်လိပ်၊ (ခရီးဆောင် အော်တိုကင်မရာနဲ့ အများစုသုံးစွဲနေကြသော တစ်လိပ်(၃၆)ကွက်ထွက် ဖလင်) ဒါမှမဟုတ် နယ်တွေဘက်မှာ (ဒါမှမဟုတ်) ဆူးလေအ၀ိုင်းဘက်က ဓါတ်ပုံဆိုင်တွေမှာ လိုင်စင်သွားရိုက်တော့ ဆိုင်က ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ နဂ္ဂတစ် ဖလင်ကွက်ကလေးတွေ တွေ့ဘူးတယ် ရဘူးတယ် မဟုတ်လား။ ( သာမာန်အလှပုံ၊ မှတ်တမ်းပုံ၊ ဘွဲ့ပုံ အတွက်သာဆိုပါသည်။ ဖလင်ပြားကြီးမားသော တစ်ကယ့် စီပွားရေးကြော်ငြာသုံးဖြစ်သည့် ဆလိုက်ကင်မရာသုံး ဖလင်ကော်ပြားကို မဆိုလို) အဲ့သည့် ဖလင်ကို ဓာတ်ပုံဆရာတို့က ဓါတ်ပြုဆေးရည်နဲ့ ပုံဖော်ပြီး နေရောင်သို့ အလင်းရောင်ထဲ ထောင်ကြည့်ချိန်မှာ မြင်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံစာ အကွက်ကိုပေါ့။ အဲ့သည့် တစ်ကွက်စာကို တိုင်းတာကြည့်ပါ။ ထောင့်ဖြတ်တိုင်းကြည့်က 35mm အရွယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲ့သည့်ဖလင်တစ်ကွက်စာ အရွယ်ကို စံထားပြီး DSLR တွေမှာ Full Farme & Crop Frame လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
DSLR ကင်မရာတွေမှာလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဖလင်အစား ပုံရိပ်ဖမ်းယူဖို့ လုပ်ဆောင်တဲ့ Sensor အရွယ်အစားဟာ 35mm အရွယ်အစားနဲ့အထက်ကို Full Frame ကင်မရာ၊ Sensor အရွယ်အစားဟာ 35mm အရွယ်အစားရဲ့အောက်ဆိုရင် Crop Frame ကင်မရာလို့ အကြမ်းဖျင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Sensor မှာ အရွယ်အစား အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Sensor Size ကြီးလေလေ ဓါတ်ဆရာတွေ ကြိုက်လေလေမို့ ဒီအချိန်မှာ မင်းဘယ်ကင်မရာကြိုက်လဲ လာနောက်ပြီး မမေးနဲ့ Full Frame ကင်မရာထက် Sensor Size ပိုကြီးမားသော Medium Format ကင်မရာတွေ ကြိုက်ပါတယ်လို့ အတည်ပြန်ဖြေမှာ။ (သို့ပေမယ့်လည်း Medium Format ဆိုတာကြီးက မင်းကြိုက်စိုးကြိုက် ကျနော်တို့လို ကာလသားများနဲ့ လားလားမှမထိုက်သေးတဲ့ဟာကြီး။ ကျနော်တို့ ဖလင်ကင်မရာစကိုင်တုံးက 35mm ကင်မရာတွေ လက်ထဲကိုင်သုံးနေတုံးက ဖလင်ကော်ပြား ကြီးကြီး ထည့်ရိုက်ရတဲ့ ဆလိုက်ကင်မရာကို အဝေးကနေမြင်၊ မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရ ဆိုတာမျိုးကြီး)
Sensor အခေါ်အဝေါ်များ များနှင့် အရွယ်အစား
Full Frame = 36mm x 24mm, ASP-H= 28.1mm x 18.7mm, ASP-C= 23.6mm x 15.6mm, Four Third = 17.3mm x 13mm, 1/1.7IN= 7.6mm x 5.7mm, 1.2.3IN (or) 1/3.2= 5.7mm x 4.2mm ( 1.2.3IN (or) 1/3.2= 5.7mm x 4.2mm ကတော့ ခင်ဗျားတို့ ကိုင်ဆောင်နေတဲ့ ဟန်းဆက်အများစုက ကင်မရာတွေထဲက Sensor အရွယ်အစား) ဖြစ်ကြပါတယ်။ (ပုံ ၃) Medium Format Camera က Sensor အရွယ်အစားတွေကတော့ Full Frame ထက်ကြီးမားပါတယ်။ ဥပမာ Pentax 645Z မှာ Sensor အရွယ်အစားက 43.8mm x 32.8mm သုံးထားပြီး Hasselblad H6D-100C မှာကတော့ Sensor အရွယ်အစား 53.4mm x 40mm ရှိပါတယ်။
Sensor အရွယ်အစားနဲ့ Crop Factor
Crop Factor ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပါ ရှင်းပြဖို့လိုလာပါပြီ။ အတိုဆုံးပြောရရင် Crop Factor ဆိုတာ ပုံရိပ်ဖမ်းမှန်ဘီလူး Lens ကနေ ပုံရိပ်တွေSensor ပေါ်ကျလာပြီး Sensor ကနေ ဖမ်းယူပြီး ထင်လာတဲ့ပုံရိပ်ကို ပုံအရွယ်အစားကို ကင်မရာကနေဖမ်းယူပေးမယ့် ပုံရိပ်မြင်ကွင်း အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီထက်ရှင်းအောင် မရှင်းပြနိုင်၍ ခွင့်လွှတ်ပါ ပုံ၎ ကိုကြည့်ပါက အလွယ်တကူ သဘောပေါက်နိုင်သည်) သူကလဲ မိမိကိုင်ဆောင်တဲ့ ကင်မရာပါ ဆန်ဆာအရွယ်အစားနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်ပါသေးတယ်။
အနီးစပ်ဆုံး အမြင်သာဆုံးကို ပြောရမယ်ဆိုပါက ကျနော်လက်ရှိကိုင်ဆောင်နေသော Nikon D800 သည် Full Frame Size ဖြစ်၍ မှန်ဘီလူးဆုံတာ 50mm ရှိသော Prime Lens တပ်ရိုက်မည်ဆိုပါက ဆုံတာ 50mm မြင်ကွင်းအတိုင်း အပြည့်အ၀ ရိုက်ယူနိုင်သော်လည်း Crop Frame ထဲမှ Nikon D7200 ကင်မရာနှင့် ရိုက်မည်ဆိုပါက ASP-C Sensor ဖြစ်တဲ့အတွက် Full Frame Size ကင်မရာထဲက မြင်ကွင်းအတိုင်း ပါလိုပါက Crop Frame ကင်မရာသမားက ခြေနှစ်လှမ်းနီးပါးစားမျှ ဆုတ်၍ရိုက်ပါမှ ပေါ်လွင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် Full Frame ကင်မရာဆရာက သူ့ကင်မရာတွင် မှန်ဘီလူးဆုံတာ 50mm ရှိသော Prime Lens တပ်ထားလျှင်မြင်ရသော မြင်ကွင်းနဲ့ Nikon D7200 ကင်မရာဆရာ က သူ့ကင်မရာတွင် မှန်ဘီလူးဆုံတာ 35mm ရှိသော Prime Lens တပ်ထားလျှင်မြင်ရသော မြင်ကွင်းနဲ့ အကွာအဝေးချင်းတူသည်ကို ဆိုလိုသည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် Full Frame Camera တွင် အဝေးရိုက် Tele Lens 300mm နဲ့ ရိုက်မည်ဆိုပါက မှန်ဘီလူးဆုံတာ 300mm မြင်ကွင်းအတိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ပြီး Crop Frame Camera ( APS-C Sensor) နဲ့လည်း အဆိုပါ အဝေးရိုက် Tele Lens 300mm နဲ့ရိုက်ပါက မှန်ဘီလူးဆုံတာ 450mm မြင်ကွင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖျင်း ပြောရရင် အသုံးပြု Sensor ကင်မရာက Full Frame ဆိုလျှင် မှန်ဘီလူးဆုံတာ mm ကို 1.0 နဲ့မြှောက်၊ ASP-Hဆိုလျှင် မှန်ဘီလူးဆုံတာ mm ကို 1.2 နဲ့မြှောက်၊ ASP-Cဆိုလျှင် မှန်ဘီလူးဆုံတာ mm ကို 1.5 နဲ့မြှောက်၊ Four Third ဆိုလျှင် မှန်ဘီလူးဆုံတာ mm ကို 2.0 နဲ့မြှောက်၊
ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာထပ်ပေးရရင် ကင်မရာကနေ မျက်မြင်အတိုင်း Eye Level အတိုင်း အကွာဝေးညီ မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Crop Frame ( ASP-C) ကင်မရာမှာ 35mm ဆုံတာရှိ မှန်ဘီလူး ၊Full Frame Camera မှာ 50mm ဆုံတာရှိ မှန်ဘီလူး တပ်ဆင်မှ ကွက်တိနီးပါးမြင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်အခုလော ဓာတ်ကျနေပြီး လက်လှမ်းမမှီသေးတဲ့ Fuji Film က Medium Format ကင်မရာဆိုရင် 80mm ဆုံတာရှိတဲ့ ပုံရိပ်ဖမ်းမှန်ဘီလူးလောက်နဲ့မှ မျက်မြင်အတိုင်း Eye Level အကွာဝေးကို ကြည့်နိုင် ရိုက်နိုင်မှာပါတဲ့ဗျာ။
Sensor ကျန်းမာရေး အထူးဂရုစိုက်ပေး
ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ တန်ကြေးဟာ Sensor Size အပေါ် မှာမူတည်နေသလို၊ ပုံရိပ်ကောင်းကောင်းဖမ်းဖို့၊ ပုံအရည်အသွေးကောင်းဖို့ကလဲ Sensor က လုံးဝ အခရာကျပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ စိတ်မကောက်သွားအောင် ခင်ဗျားတို့ အထိမ်းအသိမ်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခမ်းနား သွားရိုက်တဲ့သူတွေ ကိုယ်လွယ်ထားတဲ့ ကင်မရာကို Aircon မထိတွေ့စေဖို့။ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ Camera Sensor ကို အသစ်လဲလှယ်နိုင်တယ်လို့ကြားဖူးပေမယ့် ဒီမှာတော့ မတွေ့ဖူးသေးပါဘူး။ အဝေးပြေးကားကြီး Air-con Bus တွေနဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကင်မရာအိတ်ကို မိမိခေါင်းပေါ်က ပစ္စည်းထည့်တဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ထည့်တဲ့ အခန်းငယ်ထဲ ယောင်မှားလို့တောင် ထည့်မသယ်မိစေနဲ့။ (ကိုယ်တွေ့ဗျာ ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းထားမိတဲ့အတိုင်း ရေခဲရိုက်ဖြစ်သွားပြီး Sensor မကဘူး ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းပါ ထိခိုက်နိုင်)၊ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွေဘက်သွားရင် ဆားငွေ့ပါတဲ့ လေထု သတိ၊ ပြီးတော့ Lens အဖြုတ်အတပ် အလဲအလှယ်သုံးသူများ ဖုန်ထူသောနေရော ရေငွေ့လေထုထဲများနေသော အချိန် Lens အဖြုတ်အတပ် မလုပ်နဲ့။ အိမ်မှာ ကင်မရာသိမ်းထားချိန်တွင် Dry Box မှာသိမ်း၊ ဈေးကြီးမြင့်လို့ Dry Box မ၀ယ်သေးဘူးဆိုရင်လဲ အစားသုံး လျှပ်စစ်အားမလို ကော်ပုံးအလုံပိတ်လေးတွေလည်း ဈေးကွက်ထဲမှာ ချိုချိုသာသာ ၀ယ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးစိတ်ချချင်ရင်တော့ ဆေးဆိုင်က ဆီလီကွန်အထုပ်ကလေးတွေပါ အဲ့ပုံးထဲ ထည့်ထားပေါ့။
ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်တိုင်း မိမိရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံရိပ်တွေမှာ အစက်အပျောက်တွေ ပါလာပြီဆိုရင်တော့ ပုံရိပ်ဖမ်းမှန်ဘီလူးကလား၊ ဆန်ဆာကလား စစ်ဆေးပါ။ ပုံရိပ်ဖမ်းမှန်ဘီလူးကို သန့်ရှင်းပြီး (သို့) ပြောင်းတပ်ပြီးရိုက်လဲ ဒီနေရာမှာပဲ အစက်အပျောက်က ပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပြီ Sensor မှာ ဖုန်မှုန့်(သို့) မှိုကပ်နေလို့ပါပဲ။
ကင်မရာအသစ်မှာ အဲ့သည့်ပြဿနာတွေ မရှိသလောက်ဖြစ်ပေမယ့် မိမိကိုင်ဆောင်တဲ့ ကင်မရာဟာ နှစ်ကြာလာတဲ့အမျှ အဲ့ပြဿနာက ၀င်လာပါပြီ။ ကင်မရာ အဟောင်းတွေက Sensor မှာ မှိုကပ်တာတို့ ဖုန်ကပ်တာတို့ စစ်ဆေးချင်ရင် နေ့ခင်းအလင်းကောင်း ရာသီဥတု သာယာချိန်မှာ မိမိရဲ့ DSLR Camera က ပုံရိပ်ဖမ်းမှန်ဘီလူးနဲ့ ဘော်ဒီက Focus စနစ်ကို Manual မှာထား ( Focus က ဗလာဆိုရင် ဖြတ်တောက်ရှာဖွေချိန်ကြာလို့) Shutter Speed ကို 125 အထက် aperture ကို F 16 လောက်အနည်းဆုံး ကျဉ်းပေးပြီး ကောင်းကင်ပြာပြာကို Focus စနစ် Manual နဲ့ရိုက်ပြီး အဲ့ပုံကို Zoom ချဲ့ပြီး စစ်ဆေးပါ။ အမှုန်အမွှားများ ပေါ်နေပါရင် အဲ့ဒါတွေဟာ ဖုံတွေ မှိုတွေပါပဲ။ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင် ပုံရိပ်ထိခိုက်လောက်အောင် များနေတယ်ဆိုရင်တော့ Sensor ဆေးကြောဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ DSLR Camera တွေမှာ Sensor ဆေးကြောနည်းကို You Tube မှာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပေမယ့် လက်တွေ့လိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကင်မရာပြင်ဆရာတွေဆီမှာပဲ အပ်ပြီး ဆေးခိုင်းသင့်ပါတယ်။
ကိုကျော်ဇေယျ (Internet Journal)
Labels: News and Info, နည်းပညာ, ဗဟုသုတ
ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးသောဆယ်နှစ်ခန့်ကဖြစ်သည် ။ သက္ကရာဇ်အားဖြင့် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်လောက်ကဖြစ်မည် ။ ၁၉၈၉ မှစကာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အများအားဖြင့် သူမ၏တန်ဖိုးရှိလှသော လူလတ်ပိုင်းအချိန်များကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အကျဉ်းသားဘ၀ဖြင့် ကုန်လွန်ခဲ့ရသည် ။အကျဉ်းစံရသောနေရာကား တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံနံပါတ် ၅၄ ။ ထိုအချိန်မှစကာ ထိုခြံ ထိုအိမ် ထိုနံပါတ်သည် မြန်မာပြည်သူများအတွက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ရာ တော်လှန်ရေးဗဟိုချက်မအောင်မြေအဖြစ် အများပြည်သူတို့၏ရင်ထဲမှာစွဲနေတော့သည် ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးများကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့ရသောခေတ်ဖြစ်သဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟူသောနာမည်ကို လူကြားသူကြားထဲတွင် သိပ်မပြောရဲကြပေ ။ထိုအစား ပြည်သူလူထုသည် The Lady ဟူ၍လည်းကောင်း ၊ Lady 54 ( အိမ်အမှတ် ၅၄ မှအမျိုးသမီး)ဟူ၍လည်းကောင်း ကိုယ့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ကိုယ်သာ ရည်ညွှန်းပြောဆိုရသည် ။အဆိုတော်လေးဖြူက ပါဝါ ၅၄ ဟုတေးစီးရီးအမည်ကိုပေးသည် ။ စာပေစိစစ်ရေးခွင့်မပြုသောကြောင့် ပါဝါ အမည်နှင့်ပဲ စီးရီးအမည်တပ်ခွင့်ရသည် ။ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အိမ်အမှတ် ၅၄ ။ ထိုသုံးခုသည်ခွဲမရပဲ တပေါင်းတည်းဖြစ်နေသည် ။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့တဘ၀လုံးစောင့်မျှော်နေသူ လူတယောက်ထံမှ သတင်းစကားတခုစတင်ကြားရသည် ။
ကျွန်တော်တို့သည် မည်သူကို တဘ၀လုံးစောင့်မျှော် ခဲ့ပါသနည်း ။၁၉၈၈ အရေးအခင်း ၊ ရှစ်လေးလုံးဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုမှုအရေးတော်ပုံကြီး စတင်ကာစတွင် တိုင်းပြည်ကအမျှော်ကြီး မျှော်နေသူမှာ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သားကြီး ဦးအောင်ဆန်းဦးကိုဖြစ်သည် ။ သူ့ အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို မဟုတ်မခံ ၊မတရားတာကို ဆန့်ကျင်ရင်ဆိုင်လိုက်မည်ဆိုသောစိတ်နှင့် ဂျပန်ဓားကြီးကိုမြိနေအောင်သွေး၍ ကိုင်ကာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို အားကောင်းမောင်းသန်တော်လှန်ပြီး ၊ မြန်မာပြည်သူလူထုကို ခေါင်းဆောင်မှုပေးမလားဟု ထိုစဉ်က မြန်မာတပြည်လုံးအမျှော်လင့်ကြီးမျှော်လင့်ခဲ့သည် ။ အရှေ့တောင်အာရှ၏အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံအဖြစ်မှ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ၂၆ နှစ်အတွင်းသက်ဆင်းရောက်ရှိခဲ့ရသော မြန်မာနိုင်ငံသားများမှာနိုင်ငံရေးအရချောင်ပိတ်နေပြီး ထိုစဉ်က ထွက်ပေါက်တခုမှာ ဆိုင်းပြည်ကိုဦးဆောင်မည့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုမျှော်လင့်နေကြချိန်ဖြစ်သည် ။
ကျောင်းသားတို့၏သွေးဖြင့် ၊ ပြည်သူတို့၏ သွေးဖြင့် ခင်းခဲ့သောလမ်းပေါ်တွင် ပြည်သူကယုံကြည်ကိုးစားသောခေါင်းဆောင်အလိုရှိနေပေရာ ၊ထိုသူမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သားကြီးပင်ဖြစ်သည် ။ သို့သော် တိုင်းပြည်ကို စစ်တပ်ကသာ ၁၉၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် အာဏာသိမ်းပြီး အရေးအခင်းကြီးတစစီ ကွဲကြေသွားခဲ့ရသည် ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်စောင့်စားနေသော ဦးအောင်ဆန်းဦးကတော့ မြန်မာပြည်သို့ရောက်မလာခဲ့ပါ ။ မဟာမိတ်လေယာဉ်များက မီးဖို၍စောင့်ခိုင်းကာ ညစဉ် ရွာအပြင်မှ မီးပုံကြီးဖြင့်ထွက်စောင့်ရသော အင်္ဂလိပ်လေယာဉ်များထံမှလက်နက်ချပေးနိုးနိုး စောင့်မျှော်ရပြီး ဘာမှမယ်မယ်ရရမရလိုက်သည့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလမှ မြန်မာ့တော်လှန်ရေးသမားကြီးများလိုပင် ဦးအောင်ဆန်းဦးကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသော ၈၈ ခေတ်က မြန်မာမျိုးချစ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုများမှာ အရေးအခင်းကြီးသာ ပြီးသွားသည် ပိုးသာကုန်မောင်ပုံစောင်းမတတ်ဆိုသလိုပင် ဘာမှရေရေ ရာရာဖြစ်မလာပါချေ ။ ဦးအောင်ဆန်းဦး နေရာတွင် မိခင်ဖြစ်သူကိုပြုစုရန်မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်နေရာမှ လူထုလှုပ်ရှားမှုထဲတွင် ၀င်ရောက်ပါဝင်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်သာ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ၏ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်လာခဲ့ပေသည် ။ သို့သော် ဦးအောင်ဆန်းဦးသည် မြန်မာပြည်ကိုပစ်ထားသည်တော့မဟုတ်ပါ ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် သတင်းစကားတခုနှင့်အတူ မြန်မာပြည်သို့ ရောက်လာပါသည် ။
သူသယ်ဆောင်လာသောသတင်းစကားကလည်းအားရှိစရာကောင်းလှသည် ။ စစ်အစိုးရကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အကျခံကာ အထီးကျန်နေ့ရက်များကိုဖြတ်သန်းရင်းရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်အံတုနေသော နှမကလေးအတွက် အားဆေးသဖွယ် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမြှင့်ပေးသည်ကား ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်မိခင်ဒေါ်ခင်ကြည်တို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သော တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံအမှတ် ၅၄ ကို အမွေခွဲဝေလိုမှုပေတည်း ။သာမန်မောင်နှမနှစ်ယောက်အမွေခွဲဝေယူလိုကြ၍တရားရုံးတွင်လျှောက်ထားသည်ဆိုလျှင် ထိုကိစ္စသည်သာမန်မျှသာဖြစ်သည် ။ ဘာမှမထူးခြား ။ ယခုတော့ ထူးခြားချက်ပေါင်းများစွာပါဝင်နေပေသည် ။ ထိုအိမ်သည် မြန်မာ့သမိုင်း၏တစိတ်တပိုင်း ၊ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး၊ ဒီမီကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲများတွင် ကမ္ဘာကအာရုံပြုရသော ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်နေရာ ။မောင်နှမနှစ်ယောက် နှင့်သာကွက်ကွက်လေးသက်ဆိုင်တော့သည်မဟုတ်သော ကမ္ဘာ့သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်ခဲ့ပြီ ။ ပစ္စုပ္ဖန်ရှိလျှင် အတိတ်ဆိုတာရှိသည် ။ အနာဂတ်ဆိုတာရှိသည် ။ အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကြပါစို့။
ယခုတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ခြံနှင့်အိမ်ကြီးသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ နေအိမ်ကို ပြတိုက်အဖြစ်အသုံးချလိုသောကြောင့် ဖယ်ပေးလိုက်ရာမှ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုဦးဆောင်သော အစိုးရက နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် လျော်ကြေးပေး ၊ ၀ယ်ပေးခဲ့သောအိမ်ဖြစ်သည် ။ ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခင်ပွန်းလည်းသေ၊ သားအလတ်အောင်ဆန်းဦးလည်းရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရသောနေရာကြီးတွင် မနေချင် မကြည့်ရက်တော့သဖြင့် ပြောင်းရွေ့ လာခြင်းဖြစ်သည် ။ ဒေါ်ခင်ကြည်ဘ၀တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက်နေခဲ့ရသောအိမ်နှစ်လုံးစလုံးသည် မိမိဘာသာ အိမ်အသစ်ဆောက်နေသော အိမ်များမဟုတ်ခဲ့ ။ မိမိအရင်နေသွားသောသူများ ဆောက်လုပ်ပြီးသားကိုမှ (အိမ်အဟောင်းကို ) တက်နေရခြင်းဖြစ်သည် ။ တာဝါလိမ်းလမ်းတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်နေခဲ့သောအိမ်သည်လည်း အိမ်ဟောင်းကြီးဖြစ်သည် ။ ထိုအိမ်တွင် နဂိုက ဦးနေ၀င်း(ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း)နေသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းထိုတာဝါလိမ်းလမ်းအိမ်ကိုဘယ်လို ရလိုက်သလဲဆိုတာတော့မသိရပေ ။တန်ရာတန်ကြေးပေးဝယ်ပုံတော့မရ ။ အင်္ဂလိပ်အပြေး ၊ဂျပန်အ၀င် ဘရုတ်ဘရက်ကာလကြီးဝယ် ပိုင်ရှင်ထွက်ပြေးသွားသောာအိမ်ကိုအပိုင်စီးလိုက်ပုံရသည် ။ထို့နောက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုနေစေသည် ။ ဗိုလ်နေ၀င်းကထိုအိမ်နှင့်မနီးမဝေး တောင်ကုန်းအောက်ဖက်ကအိမ်တအိမ်တွင်နေသည်ဆို၏ ။ တာဝါလိမ်းလမ်း(ယခုဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လမ်း) ရှိဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအိမ်ကြီးကိုကြည့်သောအခါ အိမ်ထဲတွင် David Star ဟုခေါ်သော ဂျူးလူမျိုးများ၏အထိမ်းအမှတ်ကြယ်ပုံများကိုသစ်သားတွင်ထွင်းထားတာကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့သည် ။ ဖြစ်နိုင်သည်က ဂျူးလူမျိုးများနေထိုင်သွားသောအိမ်ဖြစ်နိုင်သည် ။ မကောင်းသော အငွေ့အသက်များသည်ထိုအိမ်တွင်ရှိနေသလိုခံစားရသည် ။ ဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့ပညာတွေဖြင့်လုပ်ခဲ့သလား ၊ ဦးနေ၀င်းပဲ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလွှဲမပေးခင်အစီအရင်တွေလုပ်ခဲ့သလားမပြောတတ်ပေ ။ အရမ်းကိုကြက်သရေရှိ၍စိတ်ပျော်ရွှင်စရာနေရာတခုမဟုတ်တာတော့သေချာသည် ။ ထိုအိမ်တွင်လူနှစ်ယောက်သေသည် (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အောင်ဆန်းလင်း) ။
ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ၁၉၅၃ တွင် ယခင်တာဝါလိမ်းလမ်းနေအိမ်မှ ယခုလက်ရှိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေထိုင်ရာတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းခြံအမှတ် ၅၄ သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည် (အိမ်အသစ်မရမီစပ်ကြား ပြည်ထောင်စုရိပ်သာတွင် ခေတ္တနေရသေးသည် ) ။နောက်ပြောင်းသောဤအိမ်သည်လည်း အသစ်ဆောက်ခြင်းမဟုတ် ၊ မူလအိမ်ကြီးကို ၁၉၂၀ လောက်က စတင်ဆောက်ခဲ့ပြီး မူလပိုင်ရှင်အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတဦးလက်မှနေ၍ မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးလေလံဆွဲဝယ်ယူခဲ့သည်ဟုသိရကြောင်း ဦးခွန်သာမြင့်ကပြောသည်ဟု ဘီဘီစီသတင်းတရပ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် ။ မည်သို့ရှိစေ ထပ်မံလေလံပစ်စဉ်အစိုးရက၀ယ်လိုက်ပြီး ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆို၏ ။
သို့သော် ထိုအိမ်၏မူဘဘူတအစကိုသိသူ အဆက်အနွယ်တယောက်ဖြစ်သော ၀တ်ရည်ဖြူ ရေးထားသော စာတပုဒ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖတ်ရသည်။၀တ်ရည်ဖြူ (Wutyi Phyu ဖေ့ဘွတ်ကောင့်ပိုင်ရှင် ) ရေးထားသည့်အဆိုအရ ထိုတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းခြံအမှတ် ၅၄ ကို သူ၏အဘွား (သူ့အဖွားဒေါ်အုန်းကြည်၏အမေ) ဒေါ်အေးခင်ကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆို၏ ။အင်းလျားကန်စပ်မြေ ၂ ဧကခန့်ကို ကာလပေါက်ဈေး ရှစ်သောင်းကျပ်နှင့်ဝယ်ပြီး အင်္ဂလန်မှ ဗိသုကာကို ဒီဇိုင်းအပ်နှံ၍တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ကျပ်ငွေ တသိန်းခွဲ ကုန်ကျခဲ့သည်ဆို၏ ။ဤအိမ်ကိုဆောက်ခဲ့သူအဘွားဒေါ်အေးခင်၏ခင်ပွန်း ဦးကံမြင့်ဆုံးပါးသွားချိန်မှာ ဦးကံမြင့်၏ညီအရင်းဖြစ်သူ ဦးသိန်းမောင်နှင့်လက်ဆက်ခဲ့သည်ဟုပြောပေသည် ။ စစ်ကြီးပြီးသွားချိန်တွင် (ပထမကမ္ဘာစစ်လား၊ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လား ရေးမထားပါ) ဦးသိန်းမောင်သည် စစ်တွင်းလက်ကျန်ပစ္စည်းများကို လေလံတင်ရာ လုပ်ငန်းတွင်စီးပွားရေး လုပ်လိုသဖြင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အေးခင်အား တိုင်ပင်ရာဇနီးမှသဘောမတူသဖြင့် ခြံအမှတ် ၅၄ အိမ်ဂရံကိုပေါင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည် ။ ဒေါ်အေးခင်မကျန်းမာခိုက် လက်မှတ်အစားထိုးကာ ဘဏ်တွင်ပေါင်နှံခဲ့သည်ဆို၏။ ထိုအတောအတွင်းဒေါ်အေးခင်မှာ နာမကျန်းဖြစ်ကာ အသက် ၅၀ မပြည့်မီအရွယ်တွင်ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်ဆို၏။ ဦးသိန်းမောင်ရော ဒေါ်အေးခင်ရော သူတို့ဆောက်ခဲ့သောအိမ်ကြီးတွင်သက်တမ်းစေ့မနေခဲ့ရပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသည် ။ ၁၉၅၀ ၀န်းကျင်တွင် လက်ရှိနေအိမ်ကိုဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လုပ်မည်ဖြစ်သဖြင့် ဒေါ်ခင်ကြည်ကိုအိမ်အစားပေးရန် မည်သည့်နေရာတွင်နေလိုကြောင်း ဦးနုအစိုးရမှမေးမြန်းရာ ရေကန်စပ်နှင့်အိမ်အမျိုးအစား ကိုနှစ်ခြိုက်ကြောင်းပြောခဲ့သည်ဆို၏ ။ ထိုအချိန်တွင် ရန်ကုန် အင်းလျားကန်စပ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားသော အိမ်မှာ သုံးလုံးတိတိသာရှိသည်ဟုသိရသည် ။ အိမ်တလုံးမှာ သတင်းစာသမားတဦး၏အိမ် ၊ တခုမှာ မျက်နှာဖြူစာသင်ကျောင်းဖွင့်ထားသောအိမ် နှင့် တခုမှာ မ၀တ်ရည်ဖြူ၏အဘွားဖြစ်သူ ဒေါ်အေးခင်တို့လင်မယားဆောက်ထားခဲ့သောအိမ်ဖြစ်သည် ။ ဒေါ်အေးခင်ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ဘဏ်တွင် ပေါင်ထားသောဂရံကို ငွေကြေးအလုံအလောက်နှင့် ရွေးရန်ကြိုးစားသော်လည်း အခက်အခဲများကြောင့်မရွေးနိုင်တော့ပဲ ၀န်ကြီးချုပ်ဦးနုမှတဆင့် ဗိုလ်ချုပ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည် ၏လက်ထဲသို့ ရောက်ခဲ့ကြောင်း ပြန်ပြောင်းရှင်းပြထားပါသည် ။ ဒေါ်အေးခင် ၏သမီးအရင်း ဒေါ်အုန်းကြည် နှင့်ခင်ပွန်းဦးကျင်သောင်းတို့ သည် သားသမီးငါးဦးကို ယခုခြံအမှတ် ၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းတွင်ပဲမွေးဖွားခဲ့ပြီး ထိုသားသမီးငါးယောက်အနက် လေးယောက် သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးကြောင်း ။ နောက်တော့ သူတို့ မိသားစု ဆရာစံလမ်းအိမ်သစ်သို့ ပြောင်းရွေ့ ခဲ့ကြကြောင်းရေးသားထားပါသည် ။ ဆရာစံလမ်းရောက်မှသူ့ မိခင်နှင့်သူ့ အဒေါ်ကိုမွေးဖွားကြောင်း ဒေါ်ဝတ်ရည်ဖြူ ကရေးသားထားပါသည် ။
သူပြောသလိုဆိုလျှင် ထိုအိမ်သည် အိန္ဒိယအနွယ်များဆောက်ခဲ့ခြင်းဆိုသောစကားနှင့်ကွဲလွဲနေသည် ။ မြန်မာစစ်စစ်မိသားစုများ မူလဘူတကဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ထို့နောက်မှ ဘဏ်တွင်အပေါင်ဆုံး ၊ ထိုအပေါင်ဆုံးအိမ်ကို ဦးနုအစိုးရကနိုင်ငံတော်ငွေဖြင့်ဝယ် ၊ ထို့နောက်ဒေါ်ခင်ကြည်မိသားစုကိုပေးအပ်ခဲ့သည်ဆိုသောသမိုင်းကိုမြင်လာရပါသည် ။ ဤနေရာတွင် ဖေ့စ်ဘွတ်တွင်ရေးချင်ရာလျောက်ရေးတင်သောသူတယောက်၏စကားကို အလွယ်တကူယုံသလားဟူသောမေးခွန်းရှိနိုင်ရာ ကျွန်တော်သည် စကားတခွန်းကိုအလွယ်မယုံတတ်ပါ။ သို့သော် ဒေါ်ဝတ်ရည်ဖြူ ရေးပြထားသောစာတွင် စာချည်းပဲမဟုတ်ပဲ ဓာတ်ပုံအထောက်အထားတွေများစွာလဲပါဝင်ပါသည် ။ ထိုဓာတ်ပုံများထဲတွင် ၁၂.၁၀.၁၉၄၇ နေ့စွဲထိုးထားသော ဓာတ်ပုံတပုံပါရာ အမျိုးသမီးတယောက်သည်ကလေးချီထားပြီး ယခုခြံအမှတ် ၅၄ အိမ်ဟုယူဆရသော တိုက်ကြီးကိုနောက်ခံပြူ၍ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံတပုံကိုတွေ့ ရပါသည် ။ ထိုဓာတ်ပုံတွင် အဖွား ခြံအမှတ် ၅၄ တွင် အိမ်နောက်ခံနှင့်ဟုရေးထားပါသည် ။ လုပ်ကြံထားသောပုံမဟုတ်ပဲ မူရင်းဆေးသားမှန်းသိသာနိုင်သောဓာတ်ပုံအဟောင်းတပုံဖြစ်သည်။ နောက်တပုံမှာ အဖိုးနဲ့အဖွား ခြံအမှတ် ၅၄ တွင် အင်းလျားကန်နောက်ခံနှင့် ဟုရေးထားသောဓာတ် ပုံဖြစ်ပါသည် ။ ထို့အပြင်ရေကန်စပ်တွင်လှေလှော်နေသောဓာတ်ပုံ ၊ ခြံအမှတ် ၅၄ အိမ်ကြီးထဲတွင် မင်္ဂလာဆောင်စဉ်ရိုက်ထားသော ပုံများလဲတင်ပြထားပါသည် ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ရေးသားချက်မှာ “ဤအကြောင်းများဖော်ပြရာတွင် သမိုင်းရေးရာတွင် ဖယ်ချန်၍မရသော အမွေအနှစ်တခု အကြောင်းပိုမိုသိရှိစေချင်ခြင်း ၊ မိမိအဘိုးအဘွားများ ဆောက်ခဲ့၍ဂုဏ်ယူခြင်း၊ ထိုအိမ်ကြီးသည် နိုင်ငံတွင် အလွန်အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍများတွင်အထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင်း မိမိဘ၀တွင် အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ရခြင်း တို့သာစိတ်ထဲတွင်ရှိပါသည် ။ မည်သည့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးကျော်ကြားရေး အကျိုးအမြတ်တစုံတရာ ပါဝင်ပတ်သက်လိုမှု တစိုးတစေ့မှမရှိပါကြောင်း ပြတ်သားစွာအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင် “ ဟုရေးသားထားလေသည် ။ ရှင်း၏ ။ ဤအိမ်ကိုဘယ်သူဆောက်ခဲ့သည် ။ မည်သို့မည်ပုံ ဦးနုအစိုး၇လက်ရောက်ခဲ့သည် ။ ထိုမှ မည်သို့မည်ပုံ ဒေါ်ခင်ကြည် တို့မိသားစုလက်ထဲသို့ရောက်သွားရပုံကို သမိုင်းကြောင်းပြောပြချင်စိတ်သာရှိပြီးအခြား အရှုပ်အရှင်းလုပ်လိုစိတ်မရှိဟု မူလအိမ်ရှင်မိသားစု၏အဆက်အနွယ် တဦးကဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်၏ ။
ဤနေရာတွင်တူညီမှု တွေများစွာကိုတွေ့ ရသည် ။ ဤအိမ်ကိုဆောက်ခဲ့သည်၊ နေခဲ့ဖူးသည်ဆိုသော အဆက်အနွယ်များကလည်း ဤခြံကြီး၊ဤအိမ်ကြီးသမိုင်းဝင်အိမ်ကြီး ဖြစ်နေပြီ ဆိုတာ ကိုလက်ခံ၏ ။ တန်ဖိုးထား၏ ။ ဤအိမ်တွင်မနေဖူးသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များများကလည်း ဤအိမ်ကြီး ဤခြံကြီးသည် မြန်မာ့သမိုင်းဝယ် တန်ဖိုးကြီးလှသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နေသည်ဆိုခြင်းကို လက်ခံတန်ဖိုးထားကြ၏ ။ နိုင်ငံတကာကလည်း ဤအိမ်ကြီး ဤခြံကြီးသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အားနွဲ့သောအမျိုးသမီးတဦးက အကြမ်းမဖက်ပဲ ဆန့်ကျင်တော်လှန်အောင်ပွဲခံခဲ့ရာ လူသားအားလုံးနမူနာယူရမည့်အောင်ပွဲ ရခဲ့ရာသမိုင်းဝင်နေရာ ၊ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းတို့၊ အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားတို့၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟီလာ၇ီကလင်တန်တို့ ဥရောပ ၊အမေရိက၊အာရှ နှင့်တကမ္ဘာလုံး မှ လွှတ်တော်အမတ်များ ၊ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တသားတည်း၇ှိကြောင်းလာရောက် သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြသခဲ့ကြသည့် တကယ့်အဓိပတိသမိုင်းဝင်နေရာဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုလေးစားတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါကုန်၏ ။
သို့သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အစ်ကိုအရင်းဖြစ်သူက ဤစိတ်ဓာတ်မျိုးမထားနိုင်ပဲ ခြံကြီးကို အပြုတ်ဖြုတ်ရန် ၊ သမိုင်းကိုမြေလှန်ရန် ဒေါ်လာသန်း ၉၀ တန်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည့် ခြံကိုလေလံပစ်ပြီး ရသောပိုက်ဆံကိုတယောက်တ၀က်ဝေယူရန် တရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံအယူခံတက်ခြင်းကတော့ အံ့သြဘနန်းဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်သည် ။ တကယ်ဆိုလျှင် လူတိုင်းလူတိုင်းမည်သူမဆို ကိုယ့်နှမလေးကို လက်နက်အားကိုး တစိမ်းသူတွေက အနိုင်အထက်ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးထားပါလျှင် အစ်ကိုဖြစ်သူသည် ကိုယ့်နှမလေးကိုအနိုင်ကျင့်သူတွေအား ဒေါသပေါက်ကွဲကာ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြစမြဲဖြစ်ပါသည် ။ ကိုယ့်ညီမလေးကို အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ညစ်ပတ်နေကြသော လူတစုနှင့်မည်သူကမှ ဖက်လှဲတကင်း ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်သဖွယ် တပူးတွဲတွဲ လုပ်နေမည်မဟုတ်ပါပေ ။ သွေးသည်ရေထက်ပြစ်သည်ဆိုသော စကားပုံ ၊အရေးကြီးတော့သွေးနီး၊ လက်သည်းဆိပ်တော့လက်ထိပ်နာ ဆိုသော စကားပုံများအရ လူဟူသမျှ မိမိသွေးရင်းသားရင်းဘက်သို့ သာအရေးအရာပေါ်တော့ နာတတ်ကြစမြဲ ၊ပါတတ်ကြစမြဲဖြစ်သည် ။ ရန်သူဘက်သို့ပါသော အစ်ကို ဟူ၍ကား ရှားပါးပေမည် ။ ဦးအောင်ဆန်းဦးက ရှားရှားပါးပါးပင် နှမဒုက္ခရောက်နေချိန်၌ အမွေရလိုမှုဖြင့် နှမဖြစ်သူကိုတရားစွဲ၏ ။ မိမိရပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းသည်ဟုဆိုကာခွင့်လွှတ်၍ရနိုင်သေး၏ ။ သို့သော် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဦးအောင်ဆန်းဦး ပုဂံ အလိုပြည့်ကျောင်းတိုက်တွင်ရဟန်းခံသောအခါ ဆံချရာ၌ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လင်မယားက ဆံချသောပုဝါကိုကိုင်ထားသည့်ဓာတ်ပုံများတွေ့ရခြင်းကား မောင်နှမနှစ်ယောက်၏ လမ်းစဉ်သည် ပြဒါးတလမ်းသံတလမ်းတွင်ရှိနေပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသလိုရှိပါတော့သည် ။
မိမိနှမအပါအ၀င် ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူများစွာကို ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချကာ ဘ၀တွေပျက်အောင်လုပ်ခဲ့သော ၊ ဒီမိုကရေစိတောင်းဆိုဆန္ဒပြသူများကို နည်းမျိုးစုံဖြင့်ရက်ရက်စက်စက်ဖြိုခွင်းခဲ့သော အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်စစ်ဗိုလ်ချုပ် တဦးဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ရာထူးအာဏာရှိနေချိန်တွင် ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့် နီးကပ်စွာရှိနေခြင်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသာမက မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး၏ရင်ဝကိုခြေအစုံဖြင့်ဆောင့်ကန်လိုက်သလိုရှိခဲ့ပါတော့သည် ။ သြော် သူကဗိုလ်ခင်ညွန့်လူပဲ ၊ သြော်သူက ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ဘက်တော်သားပဲ ဟု လူတွေကငိုင်ကုန်ကြသည် ။ ငါတို့ တပ်မတော်ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သားက စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ တဖွဲ့တည်းပါလားဟုလူတွေကထင်ကုန်တော့သည် ။ထင်သောအခါ အရာရာကိုဆက်စပ်စဉ်းစားတော့သည်။ ။မကြာမီ ပုဂံမြို့တောင်ဘီရွာတွင် သုံးဆောင်ပြိုင်အိမ်ကြီးဖြင့် ဦးအောင်ဆန်းဦး၏အိမ်ဂေဟာဧရာမကြီးပေါ်လာသည် ။ ထိုအိမ်သည်လည်း မည်သူ့အမည်ပေါက်လဲ လူတွေကသိချင်သည် ။ မည်သူကမည်သူ့ကို မည်သို့ပေးလိုက်သလဲ ။ ရိုးရိုး အရောင်းအ၀ယ်ဖြင့်ရွာမြေကိုဝယ်၍ တိုက်ဆောက်တာလား ။ စစ်အစိုးရလက်ထက်က အထူးအခွင့်အရေးဖြင့်မြေကွက်ပေးလိုက်တာလား ၊ လူတွေကစဉ်းစားကြသည် ။ပုဂံတွင်အခြားနိုင်ငံခြားသားတွေ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းတလျောက်မြေကွက်တွေလာဝယ်ပြီး အဲဒိလိုအိမ်ကြီးတွေဆောက်နေရင်ရော ဥပဒေကခွင့်ပြုသလား မေးစရာတွေရှိ၏။
အမွေတောင်းတာရော စစ်အာဏာရှင်တွေ အလိုကျဆောင်ရွက်နေတာလား၊ ဒီခြံကြီးကို မြင်တိုင်း စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေ ကေးဝဋ်ပုဏ္ကား နဖူးကအမာရွတ်စမ်းမိသလိုဖြစ်ပြီး အပျောက်ရှင်းချင်လို့ဦးအောင်ဆန်းဦးကတဆင့်လေလံပစ်ခိုင်းနေတာလား ဟုလူတွေကတွေးစပြုလာကြသည် ။ခြံအမှတ် ၅၄ ကို ၅ +၄ = ၉ ရ၏ ။ အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုသော နာမည်တလုံးခြင်းကို အ+ဆ+စ+က ပေါင်းကြည့်လျှင်လည်း ၁+၃+၃+၂ = ၉ ရသည် ။ ခြံနံပတ် ၉ ဂဏန်းနှင့်လူအမည် ၉ ဂဏန်း ၉+၉ =၁၈ = ၉ ပင်ရသည်ဟု ဗေဒင်ဆရာ တယောက်က တွက်ပြဖူးပါသည် ။ထို့ကြောင့် ထိုခြံကြီးသည် စစ်အာဏာရှင်များအလွန်ယုံကြည်သော ၉ ဂဏန်း ကိုက်နေသဖြင့် အမြစ်ပြတ်အောင် လုပ်ချင်ကြကြောင်းလဲ ပြောကြ၏။ ဦးအောင်ဆန်းဦးပြောသလိုလေလံတင်ရောင်းလျှင် ၀ယ်မည့်သူများမှာ ထိုခြံကိုမရရအောင်ဝယ်ပြီး သူတို့ ရအောင်ကြံကြမည်ဖြစ်သည် ။ ၂၀၁၀ တွင်ခြံအမွေတ၀က်ရလိုမှုဖြင့် စပြီးတရားစွဲရာ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့သည် ထိုအမှုကိုလက်မခံပယ်ချခဲ့၍အံ့သြရသေးသည် ။ နိုင်ငံခြားသားခံထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဟူသောသုံးသပ်ချက်ဖြင့်ပယ်ချသည်ဟုလည်းကြားရသည် ။ ၀ီကီပီးဒီးယားအွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်းအပါအ၀င် သတင်းရင်းမြစ်တော်တော်များများက ဦးအောင်ဆန်းဦးကို အမေရိကန်နိုင်ငံသားဟုဖော်ပြကြသည် ။ ဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်ကလည်းတခါမှ အမေရိကန်နိုင်ငံသားမဟုတ်ပါဘူးဟုငြင်းတာလည်းမတွေ့ ဖူးချေ။ ထိုကိစ္စကို မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ အများပြည်သူသိအောင် တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးသင့်သည် ။ ဦးအောင်ဆန်းဦးသည်အကယ်၍ အမေရိကန်ုနိုင်ငံသား ဖြစ်နေသည်ဆိုလျှင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ မိခင်ဒေါ်ခင်ကြည် အမည်ပေါက် မြေအကျယ် ၁.၉၂၃ ဧက နှစ်ထပ်တိုက်နှင့် မြေတဝက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တစ်ထပ် တိုက်နှင့် မြေတဝက်ကို ဦးအောင်ဆန်းဦးအတွက် တဝက်စီခွဲဝေဖို့ အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းသည် သွေးရိုးသားရိုးဟုတ်မဟုတ် ၊ တရားစီရင်ရေးအပေါ်စစ်အစိုးရ၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဖိအားပေးမှုပါမပါကို ပြန်လှန်စစ်ဆေးသင့်လှတော့၏ ။ စစ်ဆေးနည်းမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က အမွေခွဲဝေလိုမှုကိုတရားရုံးကလက်မခံပယ်ချခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ရောက်ကာမှ တ၀က်စီယူစေဆိုခြင်းမှာ ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်မှုရှိမရှိ ။ အကယ်၍ တရားပြိုင်မှာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ခဲ့လျှင် ထိုနိုင်ငံခြားသားသည် မြေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမရှိ ဆိုသော အချက်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကအယူခံတက်သင့်လှ၏ ။ ယခုသော် အမှုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည် ။
အယူခံတက်ရမည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အယူခံမတက်ပဲ ၊ မြေတ၀က်ရယူစေဟု ဆုံးဖြတ်ပေးခံရသော ဦးအောင်ဆန်းဦးဘက်က တဆင့်တက်ကာ အားလုံးရောင်းပြီးပိုက်ဆံခွဲဖို့ ပြောနေခြင်းသည် နည်းနည်းတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသလိုရှိ၏ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိအချိန်တွင် တရားစီရင်ရေးသည် မည်သူ၏ အနှောင်အဖွဲ့မှမရှိပဲ လွတ်လပ်စွာစီရင်နေပါသည်ဟု ယုံကြည်လျှင် ခြံကိုလေလံပစ်မည့်ကိစ္စကို သာမက ထိုခြံ၏တ၀က်ကို ဦးအောင်ဆန်းဦး ရထိုက်သည်ဟု ၂၀၀၆ စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းအပေါ်ဦးအောင်ဆန်းဦးသည်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ဖော်ထုတ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကလည်း အဆုံးတိုင်ဥပဒေတိုက်ပွဲဆင်နွဲသင့်ပါကြောင်း။
Posted by Alex Aung at 1:40 AM No comments:
စေတီမျိုးမျိုး ၊ ပုထိုးသွယ်သွယ်
ဂူဝယ်စားစား ၊ များလျားချောင်ကျောင်း
လျှိုမြောင်အောင်းသည့် ၊ အပေါင်းထေရ်မွန်
သီလ၀န်သံဃာ ၊ သူတော်စွာတို့
သိက္ခာကျင့်ဆောင် ၊ လိုဏ်ကျောင်းချောင်နှင့်
တန်ဆောင်ဘုံနန်း ၊ ဤသင်္ခမ်းဝယ် ၊
တောင်တန်းစိမ်းမြ ၊ တောလည်းလှသည် ၊
သာစွမြိုင်ခြေ ၊ ဇေယျာမြေ ။
တောလမ်းစုံထွေ ၊ တောင်ရစ်ခွေ၍
အေးရေအလှူ ၊ သီတဂူနှင့်
ကြည်ဖြူ သည့်တောင် ၊ တရားချောင်က
လျှိုမြောင်မြိုင်နန်း ၊ ရှုမခန်းသည်
သာဆန်းဘုံဗွေ ၊ ဇေယျာမြေ။
ကျောက်သားထပ်ထပ် ၊ ပန်းကလပ်သို့
ထွတ်မြတ်သေလာ ၊ အောင်မြေချာဝယ်
ရောက်လာအများ ၊ ခရီးသွားတို့
အင်အားနွမ်းလျ ၊ မရွှင်ပျလည်း
ချို မြကြည်ရေ၊ သောက်မိလေလျှင်
ညှိုးခွေနုံးနောက် ၊ တွေဝေပျောက်သည်
ထွန်းတောက်ဖြူ ရွှေ ၊ ဇေယျာမြေ။
တောင်တန်းသွယ်သွယ် ၊ ရောင်ဆန်းခြယ်သည့်
တောလယ်ကိုဖြတ် ၊ ရေကြည်ပြတ်လျှင်
တစ်ရပ်ကဆွေ ၊ စိတ်မဝေနှင့်
တို့ရေအလှူ ၊ သီတဂူက
ကြည်ဖြူ ချိုအေး ၊ အသင့်ပေးပြီ
ချမ်းအေးမြိုင်ခြေ ၊ ဇေယျာမြေ။
ဆူဆူထေရ်မွန် ၊ ပညာဝန်တို့
ဟောညွှန်ချို မြ ၊ မြတ်ဓမ္မဟူ
သင်ယူပို့ချ ၊ ရွတ်အံကြသည်
ဓမ္မအသံ ၊ တောင်လုံးညံခဲ့
ဝေယံစွင့်စွင့် ၊ မိုးသို့မြင့်သည့်
ရှင်ပင့်ကိုယ်စား ၊ စေတီဖျားမှ
တွဲလျားခတ်ညံ ၊ ဆည်းလည်းသံလည်း
အတုလံဗုဒ္ဓ ၊ မိန့်ခြွေဟသည့်
ဓမ္မအသံ ၊ ဘ၀ဂ်လျှံသို့
မြိုင်ယံတကြော ၊ ဖြစ်အံ့သြသည်
သာမောဌာနေ ၊ ဇေယျာမြေ။
~ ဉာဏ်စိုး (သီတဂူ)
****ဉာဏ်စိုး (သီတဂူ) သည် သီတဂူဆရာတော်ကြီး အရှင်ဉာဏိဿ ရ ၏ ကလောင်နာမည်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
တောင်ကြီး ပဲသီးသုပ် - သက်သတ်လွတ်ခရမ်းသီးပေါင်း - ကြက်ကြွပ်အစပ်ဟင်း - ယိုးဒယားငါးချိုချဉ် (Sweet & Sour Fish)
တောင်ကြီးပဲသီး (ပဲပုစွန်) - ၃၀ဝ ဂရမ်
ကြက်သွန်နီ - ၁၁၀ ဂရမ် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၂၅ ဂရမ် (ထောင်းထားပါ)
ဆီ - စားပွဲဇွန်း ၅ ဇွန်း
ပဲမှုန့်အကျက် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
မြေပဲလှော် - စားပွဲဇွန်း ၂ ဇွန်း (ထောင်းထားပါ)
ပုစွန်ခြောက် - စာပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း (ထောင်းထားပါ)
ငံပြာရည် - စာပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ငရုတ်သီးလှော်မှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
မြေပဲထောင်း - အနည်းငယ်
၁။ ပဲသီးကို သန့်ရှင်းအောင် ဆေးပြီး နူးအောင်ပြုတ်ပါ။
၂။ ဆီအိုးတည်ပြီး ဆီပူသည်နှင့် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီထည့်ပြီး ကြော်ပါ။
၃။ ကြက်သွန်နီကြွပ်ခါနီးမှာ ကြက်သွန်ဖြူ ထည့်ကြော်ပါ။ ရွှေဝါရောင်သန်းလျှင် မီးဖိုပေါ်က ချပါ။
၄။ ပြုတ်ထားတဲ့ ပဲသီးကို ပါးပါးပြန်လှီးပြီး အသုပ် သုပ်မယ့် ဇလုံကြီးထဲ ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် မြေပဲလှော်၊ ပုစွန်ခြောက်ထောင်း၊ မြေပဲထောင်း၊ ဆီချက်၊ ငံပြာရည်နှင့် ဆားတို့ကို ထည့်ပြီး နယ်ပါ။
၅။ အစပ်ကြိုက်ပါက ငရုတ်သီးလှော်မှုန့်ထည့်ပြီး နယ်ပါ။
ခရမ်းသီး (အလုံးကြီး) - ၁ လုံး
မှို (ပြုတ်ပြီး) - ၅ ပွင့်
ငရုတ်သီး (နီ/စိမ်း) - ၄ တောင့်
ပဲငံပြာရည် (အကြည်) - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ပဲငံပြာရည် (အနောက်) - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
နှမ်းဆီမွှေး - အနည်းငယ်
၁။ ခရမ်းသီးကို အကွင်းလိုက် မထူမပါး လှီးဖြတ်ထားပါ။
၂။ ဇလုံတစ်လုံးထဲ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ (နုပ်နုပ်စဉ်း)၊ ငရုတ်သီး (တစ်ခြမ်းခြမ်း)၊ အရသာများ၊ ပဲငံပြာရည်များ၊ နှမ်းဆီမွှေးထည့်ပြီး အရသာပြုလုပ်ပေးပါ။
၃။ ပြီးလျှင် လှီးထားတဲ့ ခရမ်းသီး၊ မှိုတို့ပေါ်မှာ လောင်းထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် ပေါင်းပါ။
၄။ ခရမ်းသီးနူးပြီး အရသာလည်း အနေတော်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်မြိတ်ကို ဖြူးထည့်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ကြက်သား – ၄၀ဝ ဂရမ်
နနွင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၃ ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် – စားပွဲဇွန်း ၁/၃ ဇွန်း
ကြက်သွန်နီ – ၃ လုံး
ငရုတ်သီး (အနှစ်) – စားပွဲဇွန်း ၁/၃ ဇွန်း
၁။ ကြက်သားကို အနေတော်အတုံးများတုံးပြီး အရသာနယ်ကာ ဆီပူပူမှာ ကြွပ်ပြီး ကျက်သည်အထိ ကြော်ပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ဆီစစ်ထားပါ။
၃။ အနှစ်ချက်ရန်အတွက် ကြက်သွန်ဖြူ/နီ၊ ချင်းကို ထောင်းပြီး နနွင်းမှုန့်ဖြင့် ဆီသတ်ပါ။ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုလျှင် ငရုတ်နှစ်ထည့်ပါ။ အရသာများနှင့် ရေထည့်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် ကြော်ထားတဲ့ ကြက်သားထည့်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့် နှပ်ထားပါ။
၄။ ပြီးလျှင် ကြက်သွန်နီနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးတို့ကို အကွင်းလိုက်လှီးပြီး ထည့်ပါ။ အားလုံး စုံပြီ၊ အရသာလည်း ပြည့်စုံပြီဆိုလျှင် နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့ နံနံပင်ကို ဖြူးထည့်ကာ ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
by အံ့ဝင့်ထွဋ် (MRTV-4)
• ဝက်သား (သုံးထပ်သား) - ၃၀ဝ ဂရမ်
• ကြက်ဟင်းခါးသီး - ၁ လုံး
• ငရုတ်နှစ် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ငရုတ်သီးစိမ်း - ၄ တောင့်ခန့်
၁။ ဦးစွာ ဝက်သားကို အတုံးသေးများတုံးကာ နနွင်းမှုန့်၊ ငံပြာရည်၊ ငရုတ်ကောင်း မှုန့်တို့နှင့် နယ်ပြီး နှပ်ထားပါ။
၂။ ကြက်ဟင်းခါးသီးကို တစ်ခြမ်းခြမ်းပြီး အစေ့ထုတ်ကာ ပါးပါးလှီးပါ။
၃။ ကြက်သွန်ဖြူ/နီကို ထောင်းပြီး နနွင်းမှုန့်ဖြင့် ဆီသတ်ပါ။ အနံ့မွှေးလာပြီဆိုလျှင် ငရုတ်နှစ်ထည့်ပါ။
၄။ နယ်ပြီး နှပ်ထားတဲ့ ဝက်သားထည့်ပါ။ အရသာများ လိုသလိုထည့်ပြီး ရေထည့်ပါ။
၅။ ဝက်သားနူးလာပြီဆိုလျှင် ကြက်ဟင်းခါးသီးထည့်ပါ။ ၁၀ မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်ပြီး နှပ်ထားပါ။
၆။ ကြက်ဟင်းခါးနူးပြီး ဝက်သားလည်း ကျက်ပြီဆိုလျှင် ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါ။
၇။ အားလုံးစုံပြီဆိုလျှင် ပန်းကန်မှာပြင်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
ယိုးဒယားငါးချိုချဉ် (Sweet & Sour Fish)
ငါးချိုချဉ်ကြော်ကို အရင်က မတူတဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ တင်ထားပြီးသား ရှိပါတယ်။ အခုကြော်ထားတာက ယိုးဒယားချိုချဉ်ကြော် ပုံစံလေးပါ။ အရသာမတူဘဲ ထူးခြားတဲ့ အရသာလေးမို့ ချိုချိုချဉ်ချဉ်ကြိုက်သူများအတွက် လွယ်ကူတဲ့ ချက်နည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သက်ရာငါး - ၂ ကောင် (၂၀ ကျပ်သားခန့်)
ကော်မှုန့်/ပြောင်းဖူးမှုန့် - စားပွဲဇွန်း ၃ ဇွန်း
ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး - ၁၀ လုံး
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် - ၂ ဇွန်း
Apple Cider - ၂ ဇွန်း ( ရှလကာရည်၊ သံပရာသီး)
သကြား - ၂ ဇွန်း
ယိုးဒယားငံပြာရည် - ၁ ဇွန်း
ကြက်သွန်မြိတ်/နံနံပင် - အနည်းငယ်
၁။ ငါးကို ရေဆေးသန့်စင်ပြီး ရေစစ်ထားပါ။ ကော်မှုန့် ၂ ဇွန်းဖြင့် ငါး တစ်ကောင်လုံးနှံ့အောင် လူးပေးပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ချင်းတို့ကို ပါးပါးစိတ်ထားပါ။
၃။ အိုးထဲ ဆီထည့်၍ အပူပေးပြီး ကော်မှုန့်လူးထားသော ငါးကို အရောင် အနည်းငယ်ရသည်အထိ နှစ်ဖက်လှန်ကြော်ပြီး ဆယ်ယူ၍ ဆီစစ်ထားပါ။
၄။ ငါးကြော်သည့် အိုးထဲမှ ဆီများကို ဖယ်ထုတ်ပြီး လက်ကျန်ဆီ အနည်းငယ်ဖြင့် ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ချင်းတို့ကို ဆီသတ်ပါ။
၅။ အရောင်ရလာပါက ခရမ်းချဉ်သီးအလုံးလိုက် ထည့်ကြော်ပါ။
၆။ ခရမ်းချဉ်သီးလေးများ ပွင့်သွားပါက ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်၊ Apple Cider (သို့) သံပရာရည်၊ သကြားနှင့် ငံပြာရည်တို့ကို ထည့်ပြီး မွှေပါ။
၇။ လက်ကျန်ကော်မှုန့် ၁ ဇွန်းကို ရေအနည်းငယ်ဖြင့် ဖျော်ပြီး ဟင်းအိုးထဲ ထည့်ကာ ခပ်ပျစ်ပျစ် အနေအထားရအောင် မွှေပါ။
၈။ အရသာအပေါ့အငန်မြည်းကာ ဆီစစ်ထားသောငါးကို ပန်းကန်မှာ တည်ခင်းပြီး အပေါ်မှ ချက်ထားသော ဆော့စ်များလောင်း၍ ကြက်သွန်မြိတ်၊ နံနံပင်တို့ဖြင့် အလှဆင်ပြီး တည်ခင်းသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 3:09 AM No comments:
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ချစ်ကြိုက်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိ၊ ကြိုးချင်းထား ကြိုးချင်းညိ ဆိုတဲ့ စကားပုံဟာ စာရေးသူတို့ မြန်မာလူမျိုးများအကြားရေးပန်းစားတဲ့ စကားပုံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားပုံဟာ တကယ့်ဖြစ်ရပ်တွေနှင့် အများအားဖြင့် မှန်ကန်လေ့ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နေ့ကို (၈) နာရီ နှင့် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကို (၅) ရက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ ပဲ အချိန်တွေကို မြှုပ်နှံထားရပါတယ်။ ရက်၊လ၊ နှစ်တွေ ကြာလာတာနှင့်အမျှ လုပ်ငန်းခွင်ဟာ Second Home သဖွယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ မနက်အိပ်ယာထပြီဆိုတာနှင့် ရုံးသွားဖို့အတွက် ပြင်ဆင် တစ်နေကုန်ရုံးမှာ အလုပ်လုပ် ညနေမိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်ကြတဲ့အခါမှာ ၀န်ထမ်းတွေဟာ ဒီအလုပ်ကို Second Home လို့ မသတ်မှတ်ဘဲ ရှိပါဦးမလား။
အလားတူပဲ ၀န်ထမ်းတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ အနေကြာလာတဲ့အမျှ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ကြိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ လူ့သဘာဝအရ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချစ်ကြိုက်တာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိလာမှာပါ။ ဒီလိုမေးခွန်းကိုစာရေးသူ အနေနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ ဖြစ်ရင်တော့ ဖြစ်တာပေါ့ ဆိုတဲ့ အဖြေနဲ့ပဲ ဖြေလိုပါတယ်။ ဥပမာ၊ မိန်းမရှိတဲ့ Managing Director နဲ့ သူ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး Secretary မလေး၊ ဌာနမှူး မန်နေဂျာနဲ့ သူ့လက်အောက်က ၀န်ထမ်းတစ်ဦး ချစ်ကြိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့။
HR Manager တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ၊။ ဒီအတိုင်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် MD နဲ့ ကြိုက်နေတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေးကို ခေါ်ပြောမှာလား၊ လက်အောက်က ၀န်ထမ်းနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတဲ့ မန်နေဂျာကို ခေါ်ပြောမှာလားဆိုတဲ့ လားမေးခွန်းတွေ များစွာနဲ့ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ခေါ်ပြောမယ်ဆိုရအောင်လည်း ၀န်ထမ်းအချင်းချင်းမချစ်ကြိုက်ရဘူးဆိုတာ ဘယ်မူဝါဒမှာ ရှိတာလဲ၊ အလုပ်စ၀င်တုန်းကလည်းအဲလိုမပြောထားပါဘူး၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ကြိုက်လည်းရတယ် မကြိုက်လည်းရတယ် HR Manager နဲ့ဆိုင်လို့လားဆိုရင်တော့ HR Manager တွေအခက်တွေ့ပြီ။ တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း၊ အထက်အောက်သာမက၊ Level တူ အချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်တာကို လုံးဝလက်မခံတဲ့ မူဝါဒတွေချမှတ်ထားကြပါတယ်။
မူဝါဒအထဲမှာလည်း တကယ်လို့သာ ဒီလိုချစ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကို ဖေါ်ထုတ်သိရှိခဲ့ရင်အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေအထိရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ တစ်ဦးတည်း အမြင်အရဆိုရင် ဒီလို လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းချစ်ကြိုက်တာကို တားမြစ်တဲ့ မူဝါဒကိုက စလွဲတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းချစ်ကြိုက်တဲ့ Workplace Romances မရှိအောင်လုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ Workplace Romances ဟာ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား Productivity ၊ မျှမျှတတ စီမံခန့်ခွဲမှု အလေ့အထနဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာ ပျက်ပြားမှုတွေအထိ ထိခိုက်လာ ရင်တော့ လုပ်ငန်းအတွက် ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စောစောကပြောခဲ့သလို MD နဲ့ Secretary၊ Head of Department (HOD) နဲ့ လက်အောက်က ၀န်ထမ်း ချစ်ကြိုက်တာတွေ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် HR Manager တွေဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေကြုံလာခဲ့ရင်အသုံးတည့်နိုင်မည့် နည်းလမ်းအချို့ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
• Respect individual’s rights. လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းချစ်ကြိုက်နေသူတစ်ဦးချင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုအလေးထားပါ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ မချစ်ကြိုက်ရဘူးလေလို့သွားပြောလို့မရပါဘူး။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း မိမိဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မိမိ ဘယ်သူကိုမဆို ချစ်ကြိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုချိုးဖောက်ဖို့အထိမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ လိုအပ်လာလို့ သက်ဆိုင်သူတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရတဲ့အခါမှာလည်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို အမြဲခေါင်းထဲ ထည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
• Consider possible scenarios. ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကြိုတင် စဉ်းစားထားပါ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးချစ်ကြိုက်နေကြပြီဆိုရင် အများအားဖြင့် အလုပ်ကိုထိခိုက်တယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ လုပ်ဖေါ်ကိုဘက်အချင်းချင်းအကြား လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆက်ဆံ ရတဲ့အခါမျိုးမှာ ချစ်ကြိုက်သူတွေရဲ့ Romance ဖြစ်စေတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေဟာ တခါတလေမှာ စိတ်မသက်မသာအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
အဓိကကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေ (၃) မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမအခြေအနေကတော့ ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းချစ်ကြိုက်တာတွေဟာ သက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးချင်းရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်း တစ်ခုလုံးရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလားဆိုတဲ့
နောက်တစ်ခုက ဒီလိုချစ်ကြိုက်ခြင်းမျိုးဟာ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာတွေကို သက်ရောက်မှုရှိ နေမလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
တတိယမြောက်တစ်ခုကတော့ Workplace Romance ဟာ Sexual Harassment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရေးဆိုမှုတွေဆီကို ဦးတည်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အခြေအနေ (၃) ခုအတွက်
မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြည့်လို့ မိမိလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆုံးဆုံးဖြစ်မယ့်
အခြေအနေတစ်ခုကဘယ်ဟာလဲဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ သိပြီးတဲ့ အဆုံးဆုံး အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လို့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မှုမျိုးမှ မလိုက်လာဘဲ နေမယ်ဆိုရင် Workplace Romance နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာအကြောင်းမှ စဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ချစ်ကြိုက်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲဖို့လည်း
• Manage rather than ignore the situation. တကယ့်တကယ်တော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းချစ်ကြိုက်နေတာကို သိရက်နဲ့ မျက်ကွယ်မပြုသင့်သလို၊ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်ပြီးတော့လည်း မချစ်ကြိုက်ရဘူးလို့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါတွေအစား စီမံခန့်ခွဲ့ရမှာပါ။ HR တွေအနေနဲ့ အဓိကဖန်တီးပေးရမှာက ဆိုးအတူကောင်းဖက်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝပြီးပျော်ရွှင်စည်းလုံးတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်အောင်လို့ပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို စွက်ဖက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ HR တွေအနေနဲ့ Workplace Romance နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကိုတော့ မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ဘယ်လို ကိစ္စမျိုးမှာတော့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘူး ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
• Consider establishingapolicy. လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းချစ်ကြိုက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမယ့် မူဝါဒတစ်ခုကို တိတိကျကျ ရေးဆွဲထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စာရေးသူ လက်လှမ်းမီသလောက် လုပ်ငန်းတွေမှာတော့ Workplace Romance နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတိအလင်းရေးဆွဲထားတဲ့ မူဝါဒတွေ မရှိသလောက်ရှားကြပါတယ်။ ဘာမှ မဖြစ်ရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ ဖြစ်ရင်တော့ ဖြစ်တာပေါ့ ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ IT ဌာနက လူပျိုဝန်ထမ်း တစ်ယောက်နဲ့ Finance က အပျိုဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကြိုက်တာဟာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်ဘူး၊ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ရေးရာတွေကို မထိခိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင် အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် မိန်းမရှိတဲ့ Admin Manager တစ်ယောက်နဲ့ သူ့လက်အောက်ငယ်သား ၀န်ထမ်းအပျိုလူလွတ်တစ်ယောက် နဲ့ ချစ်ကြိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ Admin Manager ရဲ့မိန်းမက သူ့ယောက်ျားနဲ့ ကြိုက်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းမိန်းကလေးကို ရုံးဆင်းချိန်မှာ စောင့်ပြီး ဘာညာပြောဆိုတာမျိုး၊ လုပ်ငန်းခွင်အထိ လိုက်လာပြီး သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူတွေကို ဒီအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ပြောဆိုတယ်ကြပါစို့။ အတိအကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒတစ်ခု မရှိဘူးဆိုရင် HR Manager တွေအတွက် အခက်မဟုတ်ပါလား။
Certified Change Management Specialist (MSI, USA)
Ref; The Management Biblie by Neil Flanagan & Jarvis Finger
ချစ်​သူအတွဲများအား HR အမြင်​နဲ့ ချိန်​ကြည့်​ရာဝယ်​
(HR Function တွေနဲ့ RS အခြေအနေချိတ်ပြထားပုံ)
✅၀န်ထမ်းအသစ်တွေရှာဖို့ ၀န်ထမ်းရှာဖွေရေးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးအကုန်အကျခံပြီး ကြော်ငြာတာတွေ၊ အေဂျင်စီအပ်တာတွေ၊ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲတွေမှာပါဝင်တာတွေ လုပ်ပြီး ၀န်ထမ်းလောင်းတွေအလုပ်လာလျှောက်အောင်အမျိုးမျိုးကြိုးစားရပါတယ်။
❤️တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်သူဖြစ်ဖို့ သူ့အကြောင်းကိုယ်သိ၊ ကိုယ့်အကြောင်းသူသိ အောင်လုပ်တာတွေ၊ အခြားစုံစမ်းတာတွေလုပ်ရသလိုပဲ ချစ်သူဖြစ်လာအောင် စိတ်ဝင်းစားလာအောင်အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြရတယ်။
✅၀န်ထမ်းလောင်းတွေဟာ လုပ်ငန်းရဲ့သဘောသာဝနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ အနီးစပ်ဆုံး သိရှိခန့်မှန်း နိုင်အောင် အင်တာဗျူးတာတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ရသလို အပြန်အလှန် မေးခွန်းမေးကြရပြီးလိုအပ်တာတွေကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရပါတယ်။
❤️တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရင်ဘတ်ချင်းနီးစပ်နိုင်ဖို့ ဖုန်းဆက်တာတွေ၊ messenger, viva တို့မှာစကားပြောတာတွေ၊ ရံဖန်ရံခါဆိုင်တစ်ဆိုင်ဆိုင်မှာ တစ်ခုခုစားရင်း စကားပြောရ တာတွေလုပ်ကြသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့သိချင်တာတွေနဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်။
✅အလုပ်လျှောက်ထားသူနဲ့အလုပ်ခန့်အပ်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေကြောင့် သဘောတူညီမှုတစ်ခုနဲ့ အလုပ်ခန့်အပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပါတော့တယ်။
❤️တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုတွေ၊ မေတ္တာတွေ၊ သံယောဇဉ်တွေနဲ့ သဘောတူညီမှု တစ်ခုရပြီး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။
✅၀န်ထမ်းအသစ်တစ်ယောက်ခန့်အပ်ပြီးရင် လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့သဘောသဘာဝနဲ့ ရင်းနီးအောင်၊ အနေမစိမ်းနေအောင် လုပ်ငန်းခွင်မိတ်ဆက်လိုသင်တန်းတွေလုပ်ကြပါတယ်။
❤️ချစ်သူတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးရဲ့ သဘောသဘာဝတွေနဲ့ရင်းနီးအောင် အနေမစိမ်းအောင် အသိမိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်တာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
✅၀န်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပေမဲ့ အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း (Permanent) မဖြစ်သေးဘဲ အစမ်းခန့်ဝန်ထမ်း (Probation) အဖြစ်နဲ့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားနှစ်ဘက်စောင့်ကြည့် နေကြပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေရင် အမြဲတန်းဝန်ထမ်း (Permanent) အဖြစ် အတည်ပြုခန့်ထားတဲ့ (Confirmation) လုပ်ပြီး အလုပ်ရှင်ဘက်ကသဘောမကျရင် လုပ်ငန်းတာဝန်မှရပ်စဲတဲ့ (Termination) လုပ်သလို ၀န်ထမ်းဘက်ကသဘောမကျရင်လည်း အလုပ်မှနှုတ်ထွက်တဲ့ (Resignation) လုပ်ပါတယ်။ Resignation တို့ Termination တို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ တကယ်လို့ ၀န်ထမ်းထပ်မခန့်လို့မရတာဆို ၀န်ထမ်းရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းစဉ်က အစကပြန်စရပြီး ထပ်ခန့်ဖို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ၀န်ထမ်းရှာဖွေခန့်ထားရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကပြီးသွားပါပြီ။
❤️ချစ်သူတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ချစ်စခင်စကြင်နာစတွေရဲ့သဘာဝအရ နှစ်ဘက်စလုံးက အစွမ်းကုန်ချစ်ပြနေကြပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အနေအထားကို စောင့်ကြည့်ပြီး တချို့အတွဲတွေက ဘ၀အတွက်လက်တွေဖေါ်အဖြစ် (Permanent) ကို အတည်ပြု (Confirmation) လုပ်ကြတာရှိသလို တချို့အတွဲတွေကတော့ နှစ်ဦးသဘောတူ ပြတ်ဆဲတာတွေ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကလမ်းခွဲတာတွေ Termination တို့ Resignation တို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ တချို့တွေက နောက်ထပ်ကြင်သူတစ်ယောက်ထပ်ရှာကြပြီး တချို့က ချစ်သူထပ်မရှာတော့ဘဲ အရိုးထုတ်သွားကြတော့တယ်။
✅အတည်ပြုခန့်ထားပြီးတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို လုပ်ငန်းခွင်မှာကြာလာတာနဲ့အမျှ ၀န်ထမ်းရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက် (၂) ကိုခု ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရပြီး လိုအပ်ရင် ၀န်ထမ်းရော လုပ်ငန်းပါတိုးတက်စေဖို့အတွက် သင်တန်းတွေပေးရပါတယ်။
❤️ချစ်သူတွေဖြစ်လာပြီးနောက် တစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက် အခြေအနေတွေကို နားလည်မှုတွေထားကြသလို လိုအပ်ရင်လည်း ချစ်သူ (၂) ဦး အတူတကွ လက်တွဲသွားဖို့အရေး လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရပါတယ်။
✅၀န်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်မှာ အနေကြာလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ငန်းခွင်နေပျော်မှုနဲ့ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားရှိမှုဆိုတာတွေ မရှိတတ်တော့တဲ့အတွက် ၀န်ထမ်းတွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ တက်တက်ကြွကြွအလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိလာအောင် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ Motivate လုပ်ရပါတယ်။
❤️ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ချစ်စခင်စကြင်နာစကလိုမဟုတ်ဘဲ ချစ်သူ (၂) ဦးရဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အိပ်မက်ကမ္ဘာလေးတည်တံ့နေဖို့အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်ကြပါတယ်။
✅၀န်ထမ်းတွေလုပ်သက်ကြာလာတဲ့အမျှ လုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်ရွှင်တက်ကြွနေရအောင်လုပ်ရ သလို၊ ဗဟုသုတ၊ အရည်းအသွေးတွေတိုးတက်အောင်လည်း သင်တန်းတွေပေး၊ ရာထူးတွေတိုးရတာတွေရှိပါတယ်။
❤️ချစ်သူ (၂) ဦးအတွက် လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ကြသလို (၂) ဘက်မိဘတွေကိုလည်း အသိပေးတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။
✅၀န်ထမ်းတွေဟာ အားကိုးအားထားနေရပြီး လုပ်ငန်းနဲ့တသားတည်းကြနေပြီဖြစ်လို့ အခြားအလုပ်ကို ပြောင်းမသွားအောင် အလုပ်မထွက်သွားအောင် ၀န်ထမ်းထိန်းသိမ်းရေး မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းတွေ နဲ့ အမျိုးမျိုးထိန်းကြပါတယ်။
❤️ချစ်သူ (၂) ဦး ချစ်သက်ကြာလာကြသလို (၂) ဘက်မိဘတွေကိုလည်း အသိပေးထားပြီ ဖြစ်သော်လည်း အချစ်တွေအမြဲတမ်းရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးနေအောင်၊ တစ်ယောက်အပေါ်မှာပဲ တစ်ယောက်က အမြဲချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုတွေရှိအောင် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးယူကြပါတယ်။
✅တချို့ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်ထွက်သွားကြသလို၊ တချို့ဝန်ထမ်းတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီအလုပ်မှာပဲ နှစ်တွေအကြာကြီး အလုပ်လုပ်သွား ကြတယ်ပေါ့။
❤️တချို့ချစ်သူအတွဲတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲသွားကြသလို၊ တချို့တွေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေကတော့ Sunday တိုင်းမှာရှိနေတော့တယ်။
Posted by Alex Aung at 11:52 AM No comments:
Labels: စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲရေး, ဆောင်းပါး
Posted by Alex Aung at 2:03 AM No comments:
Samsung ရဲ့ Note Series တွေအပေါ် သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ပါ။ နည်းပညာတိုးတက်လာခဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ Galaxy Note တွေဟာ Phone တစ်လုံးထက်ပိုတဲ့ Smart Device တွေလို့ပြောရင်လည်း မမှားလောက်ပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ ဒီနေ့မှာ Samsung ရဲ့ Galaxy Note9လို Premium Flagship ဖုန်းတစ်လုံးကနေ ဘယ်လို Experience မျိုးတွေ ပြန်ရနိုင်မလဲဆိုတာကို အခု Review နဲ့အတူ ပြောပြသွားမှာပါ။
လေးထောင့်ဆန်တဲ့ သူ့ရဲ့ Design ဟာ Note9ကို Galaxy S series တွေကနေကွဲထွက်စေတဲ့ ပထမဆုံးအချက်ပါ။ ဒီဖုန်းအပေါ် First Impression ကတော့ သူ့မှာအသစ်ပါလာတဲ့ Copper Color ပေါ့။ "ခန့်ထည့်တယ်" ဆိုတဲ့ Feeling မျိုးကို ရစေတယ်။ Design ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Personally မကြိုက်တဲ့အချက်က Camera Position ပါ။ (S9+ တုန်းက ဒေါင်လိုက်ပုံစံကို ပိုသဘောကျမိတာကြောင့်လည်းပါမယ်။) Fingerprint ကလည်း နေရာမှန်သွားပြီဆိုတော့ ကျောဘက် Design မှာ ကျန်တာအပြစ်ပြောစရာမရှိ။
Notch ကြိုက်တာ၊ မကြိုက်တာကို ဘေးချိတ်ထားပြီး ခုချိန်ထိ Notch မသုံးပဲ ကိုယ်ပိုင် Design တစ်ခုကို ထိန်းထားနိုင်တာတစ်ခုနဲ့တင် Samsung ကို ချီးကျုးမိတယ်။ (ရှိန်းမောင်ဦး Pixel) ရှေ့၊ နောက် Glass ကို ဘေးဘောင်နှစ်ဖက်မှာ ကွေးပြီး ကြားကနေ Metal Frame ကို ခပ်သေးသေးလုပ်ထားတဲ့ Design က 0.35" အထူရှိတဲ့ ဒီဖုန်းကိုရုတ်တရက်ကောက်ကိုင်လိုက်ရင် သိပ်မထူသလို Feeling မျိုးကို ရစေတယ်။ (ရေရှည်ကိုင်လာရင်တော့ ထူတာက သိသာလာတယ်) Glass Body နဲ့မို့ Premium ဆန်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ပေးနိုင်တယ်ဆိုရမယ်။
Samsung ထုံးစံတိုင်း Volume နဲ့ Bixby Button က ဘယ်၊ Power Button က ညာဆိုတော့ Samsung ပြောင်းကိုင်ခါကလူအဖို့ ခလုတ်မှားနှိပ်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ Button တွေကလည်း Clicky ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုလေးဘဝင်မကျတာက Sim Tray ကို Plastic နဲ့လုပ်ထားတာလေးပါ။ (အမြဲအထုတ်အသွင်းလုပ်နေ၊တွေ့နေမှာမဟုတ်ဘူး ယူဆလို့လားပဲ) ဒီတော့ Overall ပြောရရင် Premium Level Design နဲ့ Build Quality တွေ Galaxy Note9မှာ အပြည့်အဝရှိနေပါတယ်။
Samsung Flagship တွေရဲ့ အားအသာဆုံးအချက်လို့တောင် ပြောရမလားပဲ။ Note9မှာ 6.4" Quad HD+ Super AMOLED Display ကို သုံးထားတယ်။ Display Quality ကတော့ တကယ့် Top Notch ပါ။ သူ့ရဲ့ ဘေးဘောင်နှစ်ဖက်က သိပ်မကွေးတော့တာတွေ့ရတယ်။ (ဖုန်းကို ကိုင်ထားချိန်မှာ ဘေးဘောင်တွေကို လက်နဲ့သွားထိပြီး Touch ဝင်တာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ ထင်ရဲ့) Display Size ကြီးလို့ One-handed Usage တော့ အဆင်မပြေ။ ဖြစ်နိုင်ရင် သူ့မှာ Default ထားပေးတဲ့ 1080p ကိုပဲ သုံးစေချင်တယ် (Battery စားနှုန်း အတော်လေးသက်သာလို့ပါ)
S.AMOLED မို့ Color တွေစိုတယ်။ HDR 10 ပါလို့ Wide Color Support ရတယ်။ Contrast Mode ၄မျိုးပါပေမယ့် Natural Color ကို ပိုသဘောကျတဲ့ကိုယ်တွေတွက်တော့ Basic Mode လေးက Color Accurate အတော်လေးဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ Galaxy Note9အနေနဲ့ Display ပိုင်းကို A+ ပေးနိုင်လောက်တဲ့ Level တစ်ခုမှာ ရှိနေပါတယ်။
Premium Flagship ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ Fingerprint ကို ဒီထက်ပိုမျှော်လင့်မိတာတော့ အမှန်ပါ။ Note9Fingerprint ရဲ့ Unlock Speed က တခြား Flagship တွေထက် နှေးတယ်။ ဒီတော့ တခြား Method တွေကရော? Face Unlock ပါပေမယ့် သူလည်း နှေးတဲ့အထဲပါတယ်။ (Wtf!!!!) ပိုဆိုးတာက အမှောင်မှာဆို အလုပ်မလုပ်တာပါ။ ဒီတော့ Samsung ရဲ့ Trademark တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Iris Scanner ကိုသာ သုံးပါ။ Lighting လည်းမရွေးသလို မြန်လည်းပိုမြန်လို့ Fingerprint ထက် ပိုသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်က "ပြောစရာမလိုအောင် မိုက်တယ်" ဆိုတာနဲ့တင် ကျော်ချနိုင်လောက်တဲ့ အပိုင်းပါ။ Speaker အနေနဲ့ အသံအကျယ်ဆုံးမဟုတ်တာကလွဲရင် Sound Stage တွေကောင်းတာ၊ Clarity ပိုင်း၊ Color Tone ပိုင်း စတာတွေက တကယ်ထိပ်တန်းပါပဲ။
Note9မှာ 3.5mm Headphone Jack လည်း ပါနေတုန်းပဲဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ကပ်သပ်ပြောရရင် သူ့မှာ Bass သံတွေ Heavy မဖြစ်တာကလွဲလို့ တခြား Audio Quality ပိုင်းက တကယ်အလန်းစားပါပဲ။ Dolby Atmos ကလည်းပါဆိုတော့ ကဲ.... ဦးကြီး၊ ဘာလိုသေးလဲပေါ့။ ဒီတော့ Sound Quality နဲ့ပတ်သက်ရင် Galaxy Note9ကတော့ "Pass with Flying Colors" ပါပဲ။
Galaxy Note9မှာတော့ ၂၀၁၈ ရဲ့ Samsung Flagship ဖြစ်တဲ့ Exynos 9810 ကို သုံးထားတယ်။ ဒီနေရာမှာ Benchmark Score တွေအကြောင်း နဲနဲထည့်ပြောချင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သူ့ Antutu Score Result တွေက Snapdragon 845 ကို မမှီတာပါ။ အစတော့ Thermal Throttling များရှိလားဆိုပြီး Testing လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ထူးထူးခြားခြားမတွေ့ရ။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ Maximum Score က SD 845 ရဲ့ Minimum လောက်ပဲရှိတာတော့ သိပ်မကျေနပ်။
သို့ပေမယ့် Daily Usage မှာတော့ ဒီကောင်လေးက အတော် Smooth ဖြစ်တယ်။ Gaming ပိုင်းမှာ PUBG ကို HDR, Ultra Setting ထားဆော့ရင်တော့ တစ်ချက်တစ်လေမှာ Lag တာ နဲနဲဖြစ်တာကလွဲရင် အဆင်ပြေတယ်။ သူ့ရဲ့ Display နဲ့ Sound Quality ကတော့ Gaming Experience ကို အတော်အထောက်အကူဖြစ်တယ်။ Fortnite ကို Officially ဆော့နိုင်မယ့်အပြင် Galaxy Skin ပါလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့။
ဒီတော့ Performance ပိုင်းမှာ Note9က အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်သည့်တိုင် Flagship Level Feeling နဲ့ User Experience ကောင်းကောင်းကိုတော့ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Note9ရဲ့ 4000 mAh Battery ကတော့ အရင် Note Series ရော Plus Series ထက်ပါ Great Improvement လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီတော့ Battery Life အနေနဲ့ရော? ကောင်းတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Half Volume နဲ့ Brightness မှာ
-Youtube 720p, Wifi, 1hr ကို 5%
-720p, Offline Video 1hr ကို 10%
-PUBG Highest Setting, Wifi, 1 hr ကို 16-20% ကြား ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
သိပ်သဘောမကျတာက သူ့ရဲ့ Stand-by Time ပါ။ AOD off ထားရင် 8-9hr ကို 4% နဲ့ AOD on ထားရင်တော့ 8% လောက်ထိ ကုန်တာ သိပ်ဘဝင်မကျ။ ဒီတော့ Normal Daily Usage မှာ တစ်ရက်တာကို သာသာယာယာကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ။
သူ့ Original Adaptive Fast Charger ကတော့ 10-15 W ကြား Support ပေးတယ်ဆိုပေမယ့် 18W Quick Charge နဲ့ ယှဉ်စမ်းကြည့်ချိန်မှာတော့ ကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုကို မတွေ့ရ။
1hr ကို 64% နဲ့
1:30hr ကို 10-90% အားပြည့်တယ်။ Fully Charge အတွက်တော့ 2hr နီးနီးကြာမြင့်မှာပါ။ ဒီတော့ Note9ဟာ အားအခံဆုံးဖုန်းတော့မဟုတ်ပေမယ့် ရှေ့က Galaxy တွေထက်တော့ ပိုကောင်းတဲ့ Battery Life ကို ခံစားရမှာအသေချာပါပဲ။
အလွယ်ဆုံးပြောရရင် Galaxy S9+ က Camera Set-up ကို ပိုကောင်းတဲ့ Software Support နဲ့ Note9မှာ ပါဝင်လာတာပါ။ Camera Setting မှာပိုပါလာတာကတော့ AI Camera တွေထုံးစံအတိုင်း Scene Detection ပေါ့။ (ဒါပေမယ့် Scene အရေအတွက် နဲသေးတယ်လို့ထင်မိ)
Image Quality အနေနဲ့ Daylight မှာ f/2.4, Low Light မှာ f/1.5 ကို Auto ပြောင်းပေးတယ်။ (Manual Mode မှာတော့ စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်) Image Quality ကတော့ တကယ့် Flagship Level ပါ။ Color Accurate ဖြစ်တယ်။ f/1.5 Aperture ကြောင့် Low Light Shot တွေမှာ Exposure ပိုကောင်းတဲ့ပုံတွေရတယ်။ Noise Reduction အတော်ကြမ်းသလောက် Detail ပိုင်းကို သိပ်မထိခိုက်။ Low Light မှာ အလင်းပုံမှန်လောက်ထိ Live Focus (Portrait) Mode က အလုပ်လုပ်တာရယ်၊ Background Blur ကို ရိုက်နေတုန်းရော၊ ရိုက်ပြီးမှာပါ ပြန်ချိန်နိုင်တဲ့အပြင် Wide Angle Photo ကိုပါ ပြောင်းထုတ်ပေးနိုင်တာကိုတော့ အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။
သိပ်အားမရတာက Pro Mode ပါ။ ISO ကို 50-800 ထိပဲပေးထားပြီး Shutter Speed ကလည်း 10 sec Maximum ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ Camera နဲ့သူကတော့ အဆင်ပြေတယ်ပြောရမလားပဲ။ ISO 50 ကို Shutter Speed ကစားတာက အဆင်အပြေဆုံးနဲ့ ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး ISO 100 မှာတော့ 8 sec လောက်ဆို Light Burn တွေဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ 😅
8MP Selfie ကတော့ အကောင်းဆုံးမဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာတစ်ခါတည်း မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့တော့ရတယ်။ AR Sticker တွေလည်းပါမယ်ပေါ့။
Video အနေနဲ့ 4K, 60fps Maximum ရိုက်လို့ရတယ်။ (ဒါတော့ ကျွတ်ဆင်ပါ) ပြီးတော့ Pixel3မှာကြေငြာသွားတဲ့ Object ကို View ထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး Autofocus လုပ်ပေးတဲ့ Feature ကိုလည်း Full HD, 30fps မှာ သုံးနိုင်တယ်။ EIS ကတော့ 4K, 60fps နဲ့ 1:1 Video ကလွဲရင် ကျန်တာ Support ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် 720p ကို 960 fps ရဲ့ရိုက်နိုင်မယ့် Super Slow mo Mode မှာလည်း Object ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ဖမ်းယူပေးမယ့်နေရာကို လေးထောင့်ကွက်လေးနဲ့ ပြထားပေးတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတယ်။
ဒီတော့ Camera နဲ့ Video ပိုင်းမှာတော့ Galaxy Note9ကို အကောင်းဆုံးမဟုတ်တောင် အတော်မိုက်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။
Samsung Galaxy Note9မှာ Android 8.1 အခြေခံတဲ့ Samsung Experience UI9ကို သုံးထားတယ်။ S9+ တုန်းကနဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ပိုသွက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ မကြိုက်တဲ့အချက်ပြောရရင် ခုထိ ဘာ Gesture Mode မှ မပါသေးတာပါ။ ပြီးတော့ Full Screen Mode မှာ တစ်ချို့နေရာတွေ (ဥပမာ Messenger က Text Bar) က တစ်ချက်တစ်ချက်မှာ သူ့ Navigation Key တွေနဲ့ သွားပြီးကွယ်နေတတ်တာပါ။ Floating Noti တွေကို နေရာခပ်သေးသေးနဲ့ပြပေးတာ၊ သီချင်းဖွင့်၊ Google Voice Assistance ဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာ Display ဘောင်တစ်ဝိုက် လင်းသွားတာ၊ Hepatic Home Key ကို အချိန်မရွေးသုံးလို့ရတာတွေကတော့ သဘောကျမိတဲ့အချက်တွေပေါ့။
အပိုဆောင်းအနေနဲ့ သူ့မှာ IP 68 Dust & Water Resistance ပါမယ်။ Wireless Charging Support ပေးမယ်။ Adapter ကြိုးသုံးပြီး Dex Mode သုံးလို့ရမယ်။ နောက်ဆုံး S.Pen ကို Bluetooth Remote အနေနဲ့သုံးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ Photo Presentation စတာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်။
ဒီတော့ ၁၅သိန်းနားကပ်နေတဲ့ ဒီဖုန်းတစ်လုံးကို ဘယ်သူတွေနဲ့သင့်တော်မလဲလို့ တံဆိပ်ကပ်မနေတော့ပါဘူး။ (Choice is yours.) ဒီဖုန်းမှာပါတဲ့ Feature တိုင်းဟာ No.1 ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးမှလိုအပ်မယ့် နေရာတိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားရုံမကပဲ User တွေလိုချင်လောက်မယ့် Smart & Convenient Feature အချို့ကိုလည်း စနစ်တကျ ထည့်သွင်းပေးထားတယ်။ (ဒါကြောင့် Note9ကို All-D ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်လေး တပ်ပေးခဲ့တာပါ) Battery အားမရလို့ Note 8 ကို Skip ခဲ့တဲ့ Note Fan တွေ၊ ဖုန်းအသစ်လဲသင့်ပြီလို့ယူဆတဲ့ Samsung User တွေ၊ Flagship Crazy တွေအတွက်တော့ Samsung Galaxy Note9က သေချာပေါက် All Rounder ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမှာပါ။
Samsung ရဲ့ Note Series တှအေပျေါ သဘောကတြဲ့အခကျြတဈခကျြရှိတယျ။ အဲဒါကတော့ နာမညျနဲ့လိုကျတဲ့ သူ့ရဲ့စှမျးဆောငျရညျကွောငျ့ပါ။ နညျးပညာတိုးတကျလာခဲ့ ခတျေကွီးမှာ Galaxy Note တှဟော Phone တဈလုံးထကျပိုတဲ့ Smart Device တှလေို့ပွောရငျလညျး မမှားလောကျပါဘူး။ ဆိုတော့ကာ ဒီနမှေ့ာ Samsung ရဲ့ Galaxy Note9လို Premium Flagship ဖုနျးတဈလုံးကနေ ဘယျလို Experience မြိုးတှေ ပွနျရနိုငျမလဲဆိုတာကို အခု Review နဲ့အတူ ပွောပွသှားမှာပါ။
လေးထောငျ့ဆနျတဲ့ သူ့ရဲ့ Design ဟာ Note9ကို Galaxy S series တှကေနကှေဲထှကျစတေဲ့ ပထမဆုံးအခကျြပါ။ ဒီဖုနျးအပျေါ First Impression ကတော့ သူ့မှာအသဈပါလာတဲ့ Copper Color ပေါ့။ "ခနျ့ထညျ့တယျ" ဆိုတဲ့ Feeling မြိုးကို ရစတေယျ။ Design ပိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီး Personally မကွိုကျတဲ့အခကျြက Camera Position ပါ။ (S9+ တုနျးက ဒေါငျလိုကျပုံစံကို ပိုသဘောကမြိတာကွောငျ့လညျးပါမယျ။) Fingerprint ကလညျး နရောမှနျသှားပွီဆိုတော့ ကြောဘကျ Design မှာ ကနျြတာအပွဈပွောစရာမရှိ။
Notch ကွိုကျတာ၊ မကွိုကျတာကို ဘေးခြိတျထားပွီး ခုခြိနျထိ Notch မသုံးပဲ ကိုယျပိုငျ Design တဈခုကို ထိနျးထားနိုငျတာတဈခုနဲ့တငျ Samsung ကို ခြီးကြုးမိတယျ။ (ရှိနျးမောငျဦး Pixel) ရှေ့၊ နောကျ Glass ကို ဘေးဘောငျနှဈဖကျမှာ ကှေးပွီး ကွားကနေ Metal Frame ကို ခပျသေးသေးလုပျထားတဲ့ Design က 0.35" အထူရှိတဲ့ ဒီဖုနျးကိုရုတျတရကျကောကျကိုငျလိုကျရငျ သိပျမထူသလို Feeling မြိုးကို ရစတေယျ။ (ရရှေညျကိုငျလာရငျတော့ ထူတာက သိသာလာတယျ) Glass Body နဲ့မို့ Premium ဆနျတဲ့ ခံစားခကျြမြိုး ပေးနိုငျတယျဆိုရမယျ။
Samsung ထုံးစံတိုငျး Volume နဲ့ Bixby Button က ဘယျ၊ Power Button က ညာဆိုတော့ Samsung ပွောငျးကိုငျခါကလူအဖို့ ခလုတျမှားနှိပျတာမြိုးဖွဈတတျတယျ။ Button တှကေလညျး Clicky ဖွဈတယျ။ တဈခုလေးဘဝငျမကတြာက Sim Tray ကို Plastic နဲ့လုပျထားတာလေးပါ။ (အမွဲအထုတျအသှငျးလုပျနေ၊တှနေ့မှောမဟုတျဘူး ယူဆလို့လားပဲ) ဒီတော့ Overall ပွောရရငျ Premium Level Design နဲ့ Build Quality တှေ Galaxy Note9မှာ အပွညျ့အဝရှိနပေါတယျ။
Samsung Flagship တှရေဲ့ အားအသာဆုံးအခကျြလို့တောငျ ပွောရမလားပဲ။ Note9မှာ 6.4" Quad HD+ Super AMOLED Display ကို သုံးထားတယျ။ Display Quality ကတော့ တကယျ့ Top Notch ပါ။ သူ့ရဲ့ ဘေးဘောငျနှဈဖကျက သိပျမကှေးတော့တာတှရေ့တယျ။ (ဖုနျးကို ကိုငျထားခြိနျမှာ ဘေးဘောငျတှကေို လကျနဲ့သှားထိပွီး Touch ဝငျတာမြိုးမဖွဈရအောငျလို့ ထငျရဲ့) Display Size ကွီးလို့ One-handed Usage တော့ အဆငျမပွေ။ ဖွဈနိုငျရငျ သူ့မှာ Default ထားပေးတဲ့ 1080p ကိုပဲ သုံးစခေငျြတယျ (Battery စားနှုနျး အတျောလေးသကျသာလို့ပါ)
S.AMOLED မို့ Color တှစေိုတယျ။ HDR 10 ပါလို့ Wide Color Support ရတယျ။ Contrast Mode ၄မြိုးပါပမေယျ့ Natural Color ကို ပိုသဘောကတြဲ့ကိုယျတှတှေကျတော့ Basic Mode လေးက Color Accurate အတျောလေးဖွဈတယျ။ ဒီတော့ Galaxy Note9အနနေဲ့ Display ပိုငျးကို A+ ပေးနိုငျလောကျတဲ့ Level တဈခုမှာ ရှိနပေါတယျ။
Premium Flagship ဖုနျးတဈလုံးအနနေဲ့ Fingerprint ကို ဒီထကျပိုမြှျောလငျ့မိတာတော့ အမှနျပါ။ Note9Fingerprint ရဲ့ Unlock Speed က တခွား Flagship တှထေကျ နှေးတယျ။ ဒီတော့ တခွား Method တှကေရော? Face Unlock ပါပမေယျ့ သူလညျး နှေးတဲ့အထဲပါတယျ။ (Wtf!!!!) ပိုဆိုးတာက အမှောငျမှာဆို အလုပျမလုပျတာပါ။ ဒီတော့ Samsung ရဲ့ Trademark တဈခုဖွဈတဲ့ Iris Scanner ကိုသာ သုံးပါ။ Lighting လညျးမရှေးသလို မွနျလညျးပိုမွနျလို့ Fingerprint ထကျ ပိုသုံးဖွဈခဲ့တယျ။
ဒီခေါငျးစဉျက "ပွောစရာမလိုအောငျ မိုကျတယျ" ဆိုတာနဲ့တငျ ကြျောခနြိုငျလောကျတဲ့ အပိုငျးပါ။ Speaker အနနေဲ့ အသံအကယျြဆုံးမဟုတျတာကလှဲရငျ Sound Stage တှကေောငျးတာ၊ Clarity ပိုငျး၊ Color Tone ပိုငျး စတာတှကေ တကယျထိပျတနျးပါပဲ။
Note9မှာ 3.5mm Headphone Jack လညျး ပါနတေုနျးပဲဆိုတော့ ပိုအဆငျပွတေယျ။ ကပျသပျပွောရရငျ သူ့မှာ Bass သံတှေ Heavy မဖွဈတာကလှဲလို့ တခွား Audio Quality ပိုငျးက တကယျအလနျးစားပါပဲ။ Dolby Atmos ကလညျးပါဆိုတော့ ကဲ.... ဦးကွီး၊ ဘာလိုသေးလဲပေါ့။ ဒီတော့ Sound Quality နဲ့ပတျသကျရငျ Galaxy Note9ကတော့ "Pass with Flying Colors" ပါပဲ။
Galaxy Note9မှာတော့ ၂၀၁၈ ရဲ့ Samsung Flagship ဖွဈတဲ့ Exynos 9810 ကို သုံးထားတယျ။ ဒီနရောမှာ Benchmark Score တှအေကွောငျး နဲနဲထညျ့ပွောခငျြပါတယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ သူ့ Antutu Score Result တှကေ Snapdragon 845 ကို မမှီတာပါ။ အစတော့ Thermal Throttling မြားရှိလားဆိုပွီး Testing လုပျခဲ့ပမေယျ့ ထူးထူးခွားခွားမတှရေ့။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ Maximum Score က SD 845 ရဲ့ Minimum လောကျပဲရှိတာတော့ သိပျမကနြေပျ။
သို့ပမေယျ့ Daily Usage မှာတော့ ဒီကောငျလေးက အတျော Smooth ဖွဈတယျ။ Gaming ပိုငျးမှာ PUBG ကို HDR, Ultra Setting ထားဆော့ရငျတော့ တဈခကျြတဈလမှော Lag တာ နဲနဲဖွဈတာကလှဲရငျ အဆငျပွတေယျ။ သူ့ရဲ့ Display နဲ့ Sound Quality ကတော့ Gaming Experience ကို အတျောအထောကျအကူဖွဈတယျ။ Fortnite ကို Officially ဆော့နိုငျမယျ့အပွငျ Galaxy Skin ပါလကျဆောငျရမယျဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့။
ဒီတော့ Performance ပိုငျးမှာ Note9က အကောငျးဆုံးတော့မဟုတျသညျ့တိုငျ Flagship Level Feeling နဲ့ User Experience ကောငျးကောငျးကိုတော့ ပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
Note9ရဲ့ 4000 mAh Battery ကတော့ အရငျ Note Series ရော Plus Series ထကျပါ Great Improvement လို့ ပွောရမှာပါ။ ဒီတော့ Battery Life အနနေဲ့ရော? ကောငျးတယျလို့တော့ ပွောလို့ရပါတယျ။ Half Volume နဲ့ Brightness မှာ
-PUBG Highest Setting, Wifi, 1 hr ကို 16-20% ကွား ကုနျပါလိမျ့မယျ။
သိပျသဘောမကတြာက သူ့ရဲ့ Stand-by Time ပါ။ AOD off ထားရငျ 8-9hr ကို 4% နဲ့ AOD on ထားရငျတော့ 8% လောကျထိ ကုနျတာ သိပျဘဝငျမကြ။ ဒီတော့ Normal Daily Usage မှာ တဈရကျတာကို သာသာယာယာကြျောဖွတျနိုငျမှာပါ။
သူ့ Original Adaptive Fast Charger ကတော့ 10-15 W ကွား Support ပေးတယျဆိုပမေယျ့ 18W Quick Charge နဲ့ ယှဉျစမျးကွညျ့ခြိနျမှာတော့ ကွီးမားတဲ့ကှာခွားမှုကို မတှရေ့။
1hr ကို 64% နဲ့
1:30hr ကို 10-90% အားပွညျ့တယျ။ Fully Charge အတှကျတော့ 2hr နီးနီးကွာမွငျ့မှာပါ။ ဒီတော့ Note9ဟာ အားအခံဆုံးဖုနျးတော့မဟုတျပမေယျ့ ရှကေ့ Galaxy တှထေကျတော့ ပိုကောငျးတဲ့ Battery Life ကို ခံစားရမှာအသခြောပါပဲ။
အလှယျဆုံးပွောရရငျ Galaxy S9+ က Camera Set-up ကို ပိုကောငျးတဲ့ Software Support နဲ့ Note9မှာ ပါဝငျလာတာပါ။ Camera Setting မှာပိုပါလာတာကတော့ AI Camera တှထေုံးစံအတိုငျး Scene Detection ပေါ့။ (ဒါပမေယျ့ Scene အရအေတှကျ နဲသေးတယျလို့ထငျမိ)
Image Quality အနနေဲ့ Daylight မှာ f/2.4, Low Light မှာ f/1.5 ကို Auto ပွောငျးပေးတယျ။ (Manual Mode မှာတော့ စိတျကွိုကျပွောငျးလို့ရတယျ) Image Quality ကတော့ တကယျ့ Flagship Level ပါ။ Color Accurate ဖွဈတယျ။ f/1.5 Aperture ကွောငျ့ Low Light Shot တှမှော Exposure ပိုကောငျးတဲ့ပုံတှရေတယျ။ Noise Reduction အတျောကွမျးသလောကျ Detail ပိုငျးကို သိပျမထိခိုကျ။ Low Light မှာ အလငျးပုံမှနျလောကျထိ Live Focus (Portrait) Mode က အလုပျလုပျတာရယျ၊ Background Blur ကို ရိုကျနတေုနျးရော၊ ရိုကျပွီးမှာပါ ပွနျခြိနျနိုငျတဲ့အပွငျ Wide Angle Photo ကိုပါ ပွောငျးထုတျပေးနိုငျတာကိုတော့ အတျောလေးသဘောကမြိတယျ။
သိပျအားမရတာက Pro Mode ပါ။ ISO ကို 50-800 ထိပဲပေးထားပွီး Shutter Speed ကလညျး 10 sec Maximum ပါ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ Camera နဲ့သူကတော့ အဆငျပွတေယျပွောရမလားပဲ။ ISO 50 ကို Shutter Speed ကစားတာက အဆငျအပွဆေုံးနဲ့ ရုပျထှကျအကောငျးဆုံးဖွဈပွီး ISO 100 မှာတော့ 8 sec လောကျဆို Light Burn တှဖွေဈကုနျတော့တာပါပဲ 😅
8MP Selfie ကတော့ အကောငျးဆုံးမဟုတျတာ သခြောပါတယျ။ ဖုနျးထဲမှာတဈခါတညျး မိတျကပျလိမျးပွီးတော့ ဓာတျပုံရိုကျလို့တော့ရတယျ။ AR Sticker တှလေညျးပါမယျပေါ့။
Video အနနေဲ့ 4K, 60fps Maximum ရိုကျလို့ရတယျ။ (ဒါတော့ ကြှတျဆငျပါ) ပွီးတော့ Pixel3မှာကွငွောသှားတဲ့ Object ကို View ထဲမှာ တဈခြိနျလုံး Autofocus လုပျပေးတဲ့ Feature ကိုလညျး Full HD, 30fps မှာ သုံးနိုငျတယျ။ EIS ကတော့ 4K, 60fps နဲ့ 1:1 Video ကလှဲရငျ ကနျြတာ Support ပေးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ 720p ကို 960 fps ရဲ့ရိုကျနိုငျမယျ့ Super Slow mo Mode မှာလညျး Object ရဲ့လှုပျရှားမှုကို ဖမျးယူပေးမယျ့နရောကို လေးထောငျ့ကှကျလေးနဲ့ ပွထားပေးတော့ တျောတျောအဆငျပွတေယျ။
ဒီတော့ Camera နဲ့ Video ပိုငျးမှာတော့ Galaxy Note9ကို အကောငျးဆုံးမဟုတျတောငျ အတျောမိုကျတဲ့ ဖုနျးတဈလုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။
Samsung Galaxy Note9မှာ Android 8.1 အခွခေံတဲ့ Samsung Experience UI9ကို သုံးထားတယျ။ S9+ တုနျးကနဲ့ယှဉျရငျတော့ ပိုသှကျလာတယျလို့ခံစားရတယျ။ မကွိုကျတဲ့အခကျြပွောရရငျ ခုထိ ဘာ Gesture Mode မှ မပါသေးတာပါ။ ပွီးတော့ Full Screen Mode မှာ တဈခြို့နရောတှေ (ဥပမာ Messenger က Text Bar) က တဈခကျြတဈခကျြမှာ သူ့ Navigation Key တှနေဲ့ သှားပွီးကှယျနတေတျတာပါ။ Floating Noti တှကေို နရောခပျသေးသေးနဲ့ပွပေးတာ၊ သီခငျြးဖှငျ့၊ Google Voice Assistance ဝငျတဲ့အခါမြိုးမှာ Display ဘောငျတဈဝိုကျ လငျးသှားတာ၊ Hepatic Home Key ကို အခြိနျမရှေးသုံးလို့ရတာတှကေတော့ သဘောကမြိတဲ့အခကျြတှပေေါ့။
အပိုဆောငျးအနနေဲ့ သူ့မှာ IP 68 Dust & Water Resistance ပါမယျ။ Wireless Charging Support ပေးမယျ။ Adapter ကွိုးသုံးပွီး Dex Mode သုံးလို့ရမယျ။ နောကျဆုံး S.Pen ကို Bluetooth Remote အနနေဲ့သုံးပွီး ဓာတျပုံရိုကျတာ၊ Photo Presentation စတာတှေ လုပျဆောငျနိုငျမယျ။
ဒီတော့ ၁၅သိနျးနားကပျနတေဲ့ ဒီဖုနျးတဈလုံးကို ဘယျသူတှနေဲ့သငျ့တျောမလဲလို့ တံဆိပျကပျမနတေော့ပါဘူး။ (Choice is yours.) ဒီဖုနျးမှာပါတဲ့ Feature တိုငျးဟာ No.1 ဖွဈခငျြမှဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ဖုနျးတဈလုံးမှလိုအပျမယျ့ နရောတိုငျးကို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျလုပျပေးထားရုံမကပဲ User တှလေိုခငျြလောကျမယျ့ Smart & Convenient Feature အခြို့ကိုလညျး စနဈတကြ ထညျ့သှငျးပေးထားတယျ။ (ဒါကွောငျ့ Note9ကို All-D ဆိုတဲ့နာမညျပွောငျလေး တပျပေးခဲ့တာပါ) Battery အားမရလို့ Note 8 ကို Skip ခဲ့တဲ့ Note Fan တှေ၊ ဖုနျးအသဈလဲသငျ့ပွီလို့ယူဆတဲ့ Samsung User တှေ၊ Flagship Crazy တှအေတှကျတော့ Samsung Galaxy Note9က သခြောပေါကျ All Rounder ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာမှာပါ။